WARARKA MAANTA Maarso 25, 2017Su'aalaha Maanta: Maxay tahay wax uu saxiixay Madaxweynaha Dowladda Wada Dadban Mudane Farmaajo? Maxuuse wax ugu qaban waayey hay'addaha shisheeye ee gudaha Muqdisho si sharci-darro uga dhex shaqeeya? Mise weli sheekada waa iska faan faan iyo waxay ila tahay asaga iyo Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre inay ummadda Soomaaliyeed ku soo celiyaan wasiiro horay ugu fashilmay wasaaradihii horay ay xilalka wasiirnimo uga soo qabteen? Soomaaliya waxay u baahan tahay dowladda hufan oo shaqada u qabta ummadda Soomaaliyeed gudaha dalka iyo dibaddaba taasoo sugta amniga gudaha iyo danaga guud ee ummadda Soomaaliya. Waxaa labada gole laga codsanayaa inay liiska wasiiradda ka saaraan wasiiradda horay ugu fashilmay wasaaradohoodii hore marka ummadda Soomaaliyeed uma baahna dad horay u fashilmeen!https://www.youtube.com/watch?v=jZ0Y3N9xazsMuqdisho Maarso 25, 2017 Qaar ka mid ah Gobolada dalka iyo Magaalada Muqdisho waxaa ka Da’ay Roobab ay ku qabowsadeen shacabka, waxaana saakay dadka ay ku soo tooseen iyada oo dhulka uu Qoyan yahay.
Dadka reer Muqidsho ayaa saakay ku soo toosay iyada oo Magaalada uu Roob ka Da’ay, inkastoo Roobka uusan aheyn mid biyo dhigay wadooyinka waa weyn.
Gobolada dalka ee qaarkood Abaaraha ay ka jiraan ayaa shalay iyo Habeen hore waxaa ka Da’ay Roob ay dadka ku nimceesteen, maadaama Abaaro
xoogan ay ka jiraan dalka.
Mudooyinkii dambe Magaalooyinka Gobolada dalka iyo Magaalada Muqdisho
dadka waxa ay isugu imaanayeen Salaad Roobdoon ah, oo Alle ay kaga baryayeen in uu Raxmadiisa ku qaboojiyo.
Gobolada dalka gaar ahaan Koonfurta iyo Degaanada Puntland waxaa laga
soo wariyay in ay ka Da’een Roobab ay ku nimceesteen dadka iyo Duunyada.
Muqdisho Maarso 25, 2017 Shirka Madaxda Urur Goboleedka (IGAD) ayaa maanta ka furmaya Magaalada Noirobi ee Caasimadda dalka Kenya, kaasi oo horey loogu balansanaa.Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galaya Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi (Farmaajo), Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, Madax ka socota dalalka ku jira Urur Goboleedka (IGAD) iyo xubnaha Deeq bixiyeyaasha caalamka.
Waxaa diirada lagu saari doonaa Shirkan maanta ka furmaya Nairobi Arimaha Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Urur Goboleedka (IGAD).
Sidoo kale waxaa lagu wadaa in Shirkaan si weyn looga doodo Abaaraha ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale Xaaladda Ammaan ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku joogga dalka Kenya ayaa Madaxda kulankaasi ka qeyb gali doonta u jeedi doono Khudbad uu kaga hadlaayo xaaladda Soomaaliya.
Shirkaan ayaa la soo gabagabeyn doonaa Galabta, waxaana laga soo saari doonaa Qodobo la xiriira xaaladaha Qaxootiga iyo sidoo kale Abaaraha Soomaaliya.Maraykanka Maarso 25, 2017 Madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, ayaa qeexay inuu la yaabay oo uu ka niyadjabay inuu burburay sharci la doonayay in lagu badelo adeega caafimaad ee Obamacare.
Xisbigiisa Jamhuuriga ayaa dib ula laabtay hindise sharciyeed ka hor inta uusan u codeyn Kongareeska Mareykanka, markaasi oo ay caddaatay in aanay haysan taageero ku filan oo lagu horgeeyo aqalka.
In meesha laga saaro adeegga caafimaad ee Obamacare ayaa waxa ay qeyb
muhiim ah u aheyd ballanqaadyadii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump.
Haddaba faafaahinta warkan ayaa waxaan uu Cabdifitaax Ibraahim Cagayare ka wareystay weriyaha BBCda ee waddanka Mareykanka, Maxamed Xaaji Xuseen ShiineMuqdisho Maarso 25, 2017Raiulwasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qaabilay wafdi uu hoggaaminayo madaxa ammaanka Midowga Afrika Danjire Ndumiso Ntshinga oo booqasho ku yimid Magaaladqa Muqdisho.
Wafdigan ka socda midowga Afrika iyo masuuliyiinta ugu sarreeysa Dalkeenna ayaa ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa howlaha ay Ciidamada Amisom ka hayaan Soomaaliya.
Danjire Ndumiso iyo wafdigiisa ayaa waxay kormeer ku tageen xeryaha Ciidanka midowga Afrika, iyagoo aad ugu kuur galay heerka uu gaarsiisan yahay wada shaqaynta ka dhaxaysa iyaga iyo Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed
oo dagaal wada jira kula kira Al-Shabaab.Maraykanka Maarso 25, 2017Taliyaha Taliska Maraykanka Africa ayaa sheegay in uu jeclaan lahaa in
la siiyo awood dheeraad ah si ay dagaal toos ah ugu qaadaan dagaalyahanada Al-Shabaab ee dagaalama Soomaaliya.
“Waxaan u baahan nahay awood badan si aan u wiiqno Awooda Al-qaacidada Soomaaliya sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah in aan helno awood badan oo aan ku qaadi karno Weeraro noo gaar ah iyo sidoo kale mid aan kala shaqeyn doono ciidanka xoogga Soomaaliya”. Ayuu yiri Thomas Waldhauser .
Bilo ka hor ayaa Aqalka Cad ee dalka Mareykanka loo gudbiyay codsi ka
yimid howlgalka Mareykanka ee Qaarada Afrika kaas oo ahaa kordhinta awoodda iyo sidoo kale howlgallada ay ka fulinayaan Soomaaliya.
Ciidanka Dowladda Mareykanka ayaa inta badan Duqeymo waxa ay la beegsadaan saldhigyada ay Gobolada dalka ku leeyihiin Al-ShabaabJubbaland State Maarso 25, 2017 Madaxwenaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe ) ayaa soo dhaweeyay golaha Wasiirada cusub uu dhawaan soo magacaabay Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. Axmed Madoobe ayaa sheegay in uu taageersan yahay golaha Wasiirada cusub , waxa uuna ugu baaqay Xildhibaanada iyo dad kale ee kasoo horjeeda Xukuumada cusub in ay dib ula laabtaan mucaaradnamada ayna eegaan danta umada Soomaaliyeed iyo xaalada adag ee lagu jiro.
Waxa uu ugu baaqay Sheekh Axmed Madoobe Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya in aysan ku degg degin mucaaradnimo iyo wax dumin, waxa uuna ka codsaday in ay taagerraan Xukuumada cusub ayna siiyaan codka kalsoonida.
Madaxweynaha Juballand ayaa sheegay in ay jiri karaan in ay wax qaldameen balse muhiim tahay in la saxo inta aan loo ordin mucaaradnimo iyo wax bur burin, waxa uuna mar kale ku baaqay in laga warsugo waxqabadka xukuumada cusub oon laga hordhicin.
”Waxaan cadeenayaa in aan taageersanahay Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya
iyo Xukuumada uu soo dhisay, mar hadii aan wilaayada u dhiibanay Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha waa in aan taageernaa waxii ay soo dhiseen,
waxii sixitaan u baahan iyada oon la buuqin ayaa la sixi karaa, waxaan ka codsanaynaa Xildhibaanada in codka kalsoonida siiyaan Xukuumada cusub, shacabkana waxaan ugu baaqayaa in ay la shaqeeyaan dowlada cusub”
Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Hadalka Madaxweynaha Jubbaland ayaa kusoo aadaya xili Xildhibaano tiro yar oo katirsan Baaelamaanka iskana waayay liiska golaha Wasiirada Xukuumada cusub ay sheegeen in ay kasoo horjeedaan Golaha Wsaiirada una diidayaan codka kalsoonidaMasar Maarso 25, 2017Madaxweynihii hore ee waddanka Masar, Maxamed Xusni Mubaarak ayaa maanta xabsiga laga sii daayay.
Go’aankan ayaa daba socda xukun ay horraantii bishan riday maxkamad, taasoo ku weyday dacwado la xiriirinayo dilka tobanaan dibed baxayaal ah
oo ka qeyb qaadanayay mudahaaradyadii xukunka looga tuuray sanadkii 2011.
Qareenkiisa ayaa sheegay in aan loo oggolaanin wali inuu gurigiisa ku laabto.Muqdisho Maarso 25, 2017 Dowladda Mareykanka ayaa maanta Taliska Midowga Afrika AMISOM ee Soomaliya ku wareejisay Gaadiid kuwa dagaalka ah oo loogu Talagalay in ay adeegsaan Ciidamada AMISOM.
Gaadiidkaan lagu wareejiyay taliska AMISOM ee Soomaliya ayaa tiro ahaan lagu sheegay 16-gaari waxaa la tilmaamay in ay yihiin Gawaaridaan kuwa Fashilaya qaraxyadda islamarkaana aan saameyn ku yeelan doonin Gawaarida.
Gaadiidka waxaa Taliska AMISOM ee Soomaliiya ku wareejiyay Saraakiil ay wasaaradda Gaashaandhiga Dowladda Mareykanka Soomaliya usoo dirtay.
Qalabka ku xiran Gawaaridaan ayaa la sheegay in uu fashilinayo qaraxyadda kuwa la aaso, kuwa laga hago Ramuud Kontoroolka, kuwa lagu soo xiro Gawaarida oo Al-shabaab ay adeegsadaan Mudooyinkii dambe.
Dowladda Mareykanka ayaa Soomaliya ka Taageeraysa dhinacyadda amniga iyo Hormarka.Maamulka Koonfur Galbeed Maarso 25, 2017Taliska Booliska Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayaa amaro ku soo rogay Ganacsatada ku nool Magaaladaasi.
Taliyaha Ciidanka Booliska Magaalada Baydhabo Korneel Mahad C/raxmaan
Aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay Booliska in uu yahay Canshuur ilaaliye, sharci ilaaliye iyo Dhibaato ilaaiye loona baahan yahay in lala shaqeeyo.
Waxa uu sheegay cid kasta oo Baydhabo Ganacsi ku leh, in looga baahan
yahay warqadda Canshuur qaadista, cidii aan warqadaas heysana in aysan ku ganacsaneyn Magaalada Baydhabo.
Sidoo kale Korneel Mahad C/raxmaan Aadan Taliyaha Ciidanka Booliska Magaalada Baydhabo ayaa sheegay canshuurta in ay anfaceyso Qof walba iyo
caruurta uu dhalay.
Waxa uu ugu baaqay Ganacsatada Baydhabo inta aan loo imaan in ay soo jartaan warqadda canshuur qaadista, cidii aan sidaas sameyna talaabo adag laga qaadi doono.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku yaalla shirkado waa weyn oo ka shaqeeya qeybaha kala duwan ee Ganacsiga, waxaana arintan hada Booliska ka soo yeertay ay noqoneysaa mid dhaxalgal u ah Ganacsatada, maadaama hadii Canshuurtii la bixiyo wadadii saxda aheyd loo isticmaalo ay ka qeyb qaadaneyso dib u dhiska dalka.WARARKA MAANTA Maarso 23, 2017Su'aalaha Maanta: Maxay tahay sababta Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre ugu magacaabay wasiiro hore oo xilalkooda ku fashilmay wasiiro kamid noqda xukuummadda uu soo dhisay? Maxay la tahay inuu qarin karo musuqmaasuqa wasiiradii hore ee dadka iyo dalka fowdo ka wada dhigay? Mise sheekada waa hala sii wada wixii la xadi karo! Maxayse tahay sababta labada gole aan loola tashan inay wax laga weydiiyo soo xulista wasiiradda cusub? Dowladdan Wada Dadban waxay tahay cagta saartay dhabo/jid/waddo ka sii liidata dowladdihii hore ee Eeboow Ummadda Soomaaliyeed u gargaar!Hargaysa Maarso 23, 2017 Dowladda Soomaaliland iyo Dowladda Turkiga ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka Labada dhinac, kadib markii Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu Hargeysa ku qaabilay Qunsulka cusub ee Turkiga u fadhin doona Soomaaliland.
Kulankan oo ay wada qaateen Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Safiirka cusub ee Dowladda Turkiga u fadhin doona Soomaaliland ayaa waxa ay si gaar ah iskugula soo qaadeen Abaaraha, Dhaqaalaha iyo arrimo kale.
Afhayeenka Madaxtooyada Soomaalialand Xuseen Aadan Cige (Deyr) ayaa sheegay Dowladda Turkiga in ay kala hadleen sidii ay wax uga qaban laheyd Abaaraha ka jira Degaanada Soomaaliland, Waxbarashada iyo Maalgashiga.
Abaaro aad u daran ayaa ka jira dalka gaar ahaan Gobolada, oo ay ugu horeeyaan Degaanada Soomaaliland, waxaana socda dadaalo Soomaaliland ay ku badbaadineyso shacabkeeda.UK Maarso 23, 2017 Booliska Ingiriiska ayaa sheegay in weerarkii ka dhacay buundada Westminster iyo bannaanka hore ee baarlamaanka dalkaasi ay u badan tahay
inuu xiriir la leeyahay Islaamiyiinta.Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay
inuu rumaysan yahay in ay garanayaan qofka weerrarka gaystay.
Shan qof ayaa dhimatay ugu yaraan 40 kalana waa ay ku dhaawacmeen kaddib
markii qofkaasi weerarka soo qaaday uu gaari marsiiyay dad marayay wadada dhinaceeda, iyo markii dambana uu toorey askari boolis ah ka hor inta aanan la toogan.
Raysal Wasaare Theresa May ayaa sheegtay in weerrarku uu ahaa mid shaydaannimo ah oo lagu qaaday xorriyadda, dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka.
Qofka weerrarka gaystay ayuusan boolisku weli magacaabin.Nairobi Maarso 23, 2017 Magaalada Nairobi ee dalkan Kenya ayaa waxaa saaka ka furmaya shir ay
yeelanayaan masuuliyiinta ugu sareysa ee Kenya iyo Soomaaliya, sida horey loo sii shaaciyay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmajo) iyo dhigiisa Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka
qeyb galaya shirkan, waxaana looga hadlayaa arrimo la xiriira Labada dal.
Shirkan ayaa waxaa si gaar ah diirada loogu saari doonaa xaalada Qaxootiga ku jira xerada Dhadhaab, Abaaraha Soomaaliya ka jira, Amniga, Ganacsiga iyo isu socodka Labada dal.
Safiirka Dowladda Soomaaliya ee Kenya Jamaal Maxamed Xasan dhowaana loo magacaabay Wasiirka Qorsheynta Maalgashiga Soomaaliya ayaa sheegay ujeedka uu Madaxweynaha Soomaaliya uu Kenya ku tagay in ay tahay ka qeyb
galka shirka maanta ka furmaya Magaalada Nairobi, ayna rajeynayaan in guul uu ku soo dhamaado.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed C/laahi Maxamed (Farmajo) iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay waxa ay booqasho rasmi ah
ku tageen Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana Madaxweynaha safarkan uu u yahay kiisa labaad, maadaama uu horey u aaday dalka Sacuudiga.Muqdisho Maarso 23, 2017 Waxaa si lama filaan ah ku kordhay xildhibaannada golaha shacabka ah ee diiddan xukuumadda Xasan Cali Kheyre oo 21-ka bishana kaga dhowaaqay Muqdisho.
Xildhibaan Idirs Cabdi Dhaqtar oo saakay la hadlay Idaacadaha maxalliga ee Muqdisho ayaa sheegay in tirada intii hore ay ka badatay islamarkaana hadda la marayo 180 xildhibaan.
Dhaqtar ayaa sheegay in marnaba xukuumaddan aysan ka gudbi doonin sida uu sheegay golaha shacabka islamarkaana dib loogu celinayo Ra’iisul
Xildhibaankan ayaa sidoo kale kula taliyey Ra’iisul wasaarah inuu dib
uga laabto magacaabista wasiirada, kahor inta aan lagu soo celin waqtina aanu ka khasaarinPuntland Maarso 23, 2017 Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Kalluumeysiga Maamulka Puntland C/raxmaan Jaamac Kulmiye ayaa faah faahin ka bixiyay Kalluumeysiga sharci darada ah ee ka socda Degaanada Puntland.
Waxa uu sheegay in ay jirto mararka qaar Maraakiib si sharci daro ah uga Kalluumeysta xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan dhanka Puntland, isaga oo sheegay Puntland in ay ka warqabto Maraakiibta sida sharci darada ah uga kalluumeysta Degaanada Puntland, taasina aan loo dulqaadan doonin.
Sidoo kale C/raxmaan Jaamac Kulmiye Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Kaluumeysiga Maamulka Puntland ayaa sheegay Maraakiibtan in ay ku dareen
Rag kor kala socda, dhaq dhaqaaqa ay sameynayaan.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Kaluumeysiga Maamulka Puntland C/raxmaan Jaamac Kulmiye ayaa sidoo kale waxa uu sheegay Puntland in 11 Markab ay siisay Shati ama Ruqsad ay uga Kalluumeysan karaan xeebaha Puntland.Soomaaliya Maarso 23, 2017 Ururka Argagixisadda Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe, waxa ay weerar abaabulan ku qaadeen
Saldhigyo ciidamada Millitariga ku leeyihiin Degmada Baraawe ee Gobolka
Shabaabka weerarka soo qaaday ayaa soo maray dhanka Xeebta Degmada Baraawe, waxayna beegsadeen Saldhigyada ciidamada Millitariga ku leeyihiin isla Xeebta Degmada Baraawe, halkaasi oo dagaal xoogan uu ka dhacay.
Gudoomiyaha Degmada Baraawe Xuseen Barre Jeex, oo wareysi siiyay Risaala ayaa sheegay in ciidamada Shabaab ay gubeen hal gaari oo nooca Cabdi bilaha ah, kaasi oo ay lahaayeen ciidamada Millitariga.
Sidoo kale Xuseen Barre Jeex Gudoomiyaha Degmada Baraawe, ayaa sheegay inay iska caabiyeen Shabaabka weerarka soo qaaday, Khasaaraha ka
dhashay dagaalkana uu ku kooban yahay.
Waxaa jira Khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi, kuwaasi oo soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay, hayeeshe waxaa adag helida macluumaadka saxda ah ee Khasaaraha dagaalka ka dhashay.
Shabaabka weerarka soo qaaday ayaa dib uga baxay Magaalada Baraawe gudaheeda, kadib dagaalka oo ku dhawaad saacad socday.
Nairobi Maarso 23, 2017 Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa shalay waxa uu booqasho rasmi ah ku tagay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay ujeedka Madaxweynaha Kenya uu u tagay
Kenya in ay tahay ka qeyb galka shir looga hadlayo arrimaha Qaxootiga Dhadhaab oo maanta Kenya ka furmaya iyo shirka IGAD oo gelinka dambe ee Jimcaha furmaya, kaasi oo isna looga hadlayo Qaxootiga ku daadsan qaar ka tirsan dalalka Afrika.
Safiirka Dowladda Soomaaliya ee Kenya Jamaal Maxamed Xasan dhowaana loo magacaabay Wasiirka Qorsheynta Maalgashiga Soomaaliya ayaa sheegay in ay rajeynayaan guulo in ay ku soo dhamaadaan shirarkan, wax badana ay
ka soo bixi doonaan.
Waa safarkii Labaad uu Madaxweyne Farmaajo ku aado dalka Dibaddiisa, kadib markii 8-dii Febraayo ee sanadkan loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana ka horeeyay safar uu ku tagay dalka Sacuudiga.Muqdisho Maarso 23, 2017 Maarso 2017/March 2017
WARARKA MAANTA Maarso
22 2017 Su'aasha Maanta: Maxay tahay sababta ay qaar kamid ah wasiiraddii shalay la magacaabay inay isku-calisaan si deg dega ah? Maxaa wasiiro horay musuqmaasuq iyo wax qabad la'aan ugu soo guuldaraystay in mar kale wasiiro loo magacaabo? Maxaa ka khaldan Mudane Madaxweyne Farmaajo? xaa ku khasbay inuu wasiiro u soo magacaabo wasiiro horay ay Qaramadda Midooway u kashifeen musuqmaasuqooda baahsanaa? Ummadda Soomaaliyeed Iyo Bulshadda Caalamka waxay degdeg kalsoonida iyo dhaqaalaha ka joojin doonaan Dowladdan Wada Dadban ee lagu soo wada aruuriyey dad qurbo-joog ah kuwaasoo horay wasiiro hawlahoodii ku guuldaraystay soo noqday!Kampala Maarso 22, 2017 Maxuu u kashifay sir badan safiir ku-xigeenka Dowladda UK ee Soomaaliya? https://www.youtube.com/watch?v=BoSChGar6w8Muqdisho Maarso 22, 2017 Ra’iisul Wasaaha Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ay Wehliyaan Taliyeyaasha Ciidamada Booliska Iyo Nabadsugidda Qaranka ayaa Caawa Booqday Cisbitaalada la Dhigay Dadkii Ku Dhaawacmay Qarax lala beegsaday
Difaaca ay Ciidamada Ammaanku ku leeyihiin Xarunta Golaha Murtida Iyo Madadaalada National Theater magaalada Muqdisho.
Cisbitaalada uu booqday Ra’iisul Wasaare Kheyre waxa ay kala ahaayeen
Madiina iyo Ordugan, isagoo midmid u xog wareystay dadka dhaawayadu soo
gaareen, si uu u qiimeeyo xaaladahooda iyo nabarada gaaray inta ay gaarsiisanyihiin.
Mudane Kheyre ayaa Warbixino ka dhageystay Saraakiisha Caafimaadka Ee
Cisbitaaladaasi, wuxuuna ka dalbaday in dag dag loogu soo gudbi
Maarso 2017/March 2017
WARARKA MAANTA Maarso 07, 2017 Su'aasha Maanta: Maxay umaleeyaan inay
cashuurta shacabka Muqdisho oo kaliya ay ka biilaan Dowladda Wada
Dadban Mudane Farmaajo Iyo Mudane Khayre? Madaxweyne Iyo Raysal
Wasaare aan tagi karin magaalo madaxda Dowladda Gobaleedka Somaliland
miyaa nabad iyo musuqmaasuq la'aan ku maamuli kara Muqdisho oo ay
xuquuqdeedii xaqireen? Meeqo jeer ayuu Xoghayihii hore Qaramadda Midooway Mr. Ban Ki-moon yimid Muqdisho? Maxuuse ku soo hordhin karaa imaanshaha Xoghayaha Qaramadda MidoowayMr. Antooniyo Guterees oo maanta Muqdisho soo booqday?
Maarso 2017/March 20172
WARARKA MAANTA Maarso 06, 2017
MAANTA Maarso 04, 2017Su'aasha Maanta: Haddii adigoo Raysal Wasaare ka ah waddan aad maamuli waysay oo aad xaday lacago farabadan sida Raysal Wasaarihii kaa horeeyey ee khaa'inul waddanka noqday Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake? Ma maantay oo aad Madaxweyne ku noqotay laaluush iyo wax isdaba-marin ayaad xal u keeni doontaa Ummadda Soomaaliyeed Mudane Farmaajo? Siro badan oo culus uu kashifay Madaxii Maamulka Dhaqaalaha Xafiiska Raysal Wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali kaasoo kadib kuu noqday Madaxii Maamulka Dhaqaalaha Xafiiska Raysal Wasaarihii hore Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo haatan ah Madaxweynaha Dowladda Wada Dadba
WARARKA MAANTA Feebaraayo 28, 2017 Su'aasha Maanta: Mudane Madaxweyne Farmaajo, waxaa xaqiiqo ah in aadan waxba ka qaban karin abaaraha dalka? Lacagtii Ummadda Soomaaliyeed loogu tallogalay ayaa hay'addo qaatay oo ku isticmaala dalaka deriska iyo meelo kale taasoo uu la qaraaban jiray Raysal Wasaaraha aad hadda magacaawday ayaa weli Soomaaliya ku sii haya fowdo dhan walba leh? Maxay kula tahay inay shirar la qabto wax ka qabanayso Ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu baabi'iyeen ayaga iyo xoolahooda? Labada gole ee dalka waxaa laga rabaa inay tallobo sharci ah ka qaadaan dadkan codsiyada beenta ah diyara iyo ku Ummadda Soomaaliyeed u sheegaya yabooha beenta taasoo lagu sii lugooynayo Ummadda Soomaaliyeed?Muqdisho
Feebaraayo 28, 2017 Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa shir looga hadlaayo abaaraha dalka ka jira waxaa uu kaga qeyb galaya xarunta ciidanka AMISOM ee Xalane.
Waxaa ka qeyb gali doona Shirkaan xubno ka socda Beesha Caalamka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira.
Shirka ayaa inta uu socdo waxa lagu falaqeyn doonaa Abaaraha dalka ka jira.
Shirkaan ayaa imaanaya xilli Abaaraha ka jira dalka ay sii baahayaan ,
islamarkaana kumanaan qof ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan abaaraha.Muqdisho
Feebaraayo 28, 2017 Maalinta Arbacada ah Taariikhdana ay ku beegan tahay 1/3/2017 waxaa xarunta golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho ka furmaya Kalfadhiga kowaad ee mudanayaasha baarlamanka Soomaliya.
Haduu helo codka kalsoonida Xildhibaanada baarlamanka Soomaliya waxa u
soo dhisi doonaa Xukuumadda Soomaliya, hadii dib loo celiyo Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa laga sugayaa in uu soo magacaaboSacuudiga Feebaraayo 28, 2017Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka dalbaday dhex dhexaadnimo ay ka sameyso Sacuudiga sidii ay ugu qancin lahayd dowladda Isku taga Imaaradka Carabta in aysan dhamaystirin saldhig militry ay ka dhisato Dekada Barbera ee maamulka Somaliland.
Warbixintaan ayaa lagu daabacay barta jariidada Riyad Post ee kaso baxda Sacuudiga waxana ay soo xiganaysa mas’uul ka tirsan xukuumadda oo ka kamid ah wafdigii u raacay madaxweyne Farmaajo dalka Sacuudiga booqashadii rasmiga aheyd uu ku tagay waxana uu shaaca ka qaaday in Farmaajo uu mas’uuliyiinta Sacuudiga uu ka dalbaday inay ku qanciyaan dowladda Imaaradka inaysan wax hormar ah ka sameyn qorshaheeda ku aadan inay saldhig militry ka dhisato deganada maamulka Somaliland ee doonaya inay madax banaani Soomaaliye inteedi kale ka qaataan.
Warbixinta ayaa muujinaysa in Farmaajo uu arimahaasi kala hadlay ee saldhiga Militry ee Imaaradka ku xigeenka dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Maxamed Bin Salman Bin Cabdi Casiis waxana goob joog ka ahaa wasiirka arimaha dibada Sacuudiga Cadil Axmed Al-jebeyr iyo mas’uuliyiin sar sare
oo boqortooyada ka tirsan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka faaideysanaya xirirka adag ee u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaradka si Imaradka uga tanasulo saldhiga Militery ee Berbara ka hirgalainayo.Puntland Feebaraayo 28, 2017 Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland Cabdiqaadir Faarax Shire oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in dhawaan Maxkamad lasoo taagi
doono Nabaddoon Cabdiqaadir Axmed Xarrago oo hadda ku xiran Magaalada Boosaaso.
Nabaddoon Cabdiqaadir Axmed Xarrago ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda in uu kasoo muuqdo Maxkamad ku taalla Magaalada Boosaaso.
Xariga Nabaddoonka ayaa yimid ka markii uu booqasho ku tagay Xabsi ay
ku xiran yihiin 7 dhalinyaro ah oo dhawaan maamulka Puntland ay ku xukumeen dil Toogasho ah , islamarkaana uu warbaahinta u sheegay in uu soo Arkay jirdil Ba’an oo loo geystay intii dhalinyaradaasi ay xabsiga ku jireen.
Maamulka Puntland ayaa la sheegay in ay si weyn uga Carooday hadalka Nabaddoonka , islamarkaana ay xabsiga dhigeen.
Xukunka lagu riday dhalinyaradaasi todobada ah ayaa waxaa kasoo horjeestay inta badan waxgaradka gobolka Bari oo sheegay in xukunka uusan aheyn mid Caddaalad ah.
Dhalinyarada ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilal qorshaysan oo ka dhacay Magaalada Boosaaso , waxaan Maxkamadda Ciidamada Puntland ay ku riday xukun dil ahPuntland Feebaraayo 28, 2017 Xildhibaanno ka tirsan Maamul Goboleedka Puntland ayaa Mooshin ka keenay Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gas iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Axmed Cali Xaashi.
Xildhibaanadaan oo ku sugan Garowe ayaa ah kuwo Mucaarad ah oo ka soo
horjeeda Xukumadda uu HogaamiyoMadaxweynahaPuntland C/wali Maxamed Cali.
Waxaa ay ku Eedeeyeen in Xukumadda C/wali Maxamed Cali Gaas aysan wax
badan qaban islamarkaana ay Waqtigeedii ku lumisay Waxyaabo aan Micno la heyn.
Dhanka kale Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo Maalmahaan Joogay Boosaaso ayaa Safar Deg Deg ah ku yimid Garowe si uu u Xaliyo Mooshinka ay ka wadaan Xildhibaanada qaar ee PuntlandPuntland Feebaraayo 28, 2017 Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdi wali Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay xiisadaha maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa Magaalooyinka Puntland.
Madaxweynaha ayaa sheegay in xiisadahaasi ay ka dambeeyaan kooxo danley ah oo doonaya in ay dhibaateeyaan shacabka kunool degaanada maamulka Puntland.
Cabdiwali Maxamed Cali ayaa sidoo kale tilmaamay in lala xisaabti doono dadka dhibtaada ka wada degaanada maamulka Puntland.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa waxaa ay sheegeen in ay Mooshin ay ka keeni doonaan Madaxweyne Gaas ka dib markii
dayacay shaqada Puntland.
Sidoo kale Ciidamo ka gadoodsan ayaa maalmo ka hor qabsaday qeybo ka mid ah Magaalada Garoowe.
Magaalada Boosaaso waxaa sidoo kale ka taagan xiisad u dhexeysa shacabka iyo sidoo kale ciidanka Puntland oo ku aadan Xarig loo geystay Nabaddoon Cabdiqaadir Axmed Xarrago.Muqdisho
Feebaraayo 28, 2017 Madaxweynaha Soomaliya Maxamed C/laahi maxamed Farmaajo ayaa Goordhaweyd furay shir soconaya hal maalin oo loogu hadlaayo Abaaraha dalka ka jira.
Shirkaan ayaa ka dhacaya xarunta xalane ee Magaalada Muqdisho, waxaa ka qeyb galaya dalalka deeq bixiyaasha iyo mas’uuliyiin kale, waxaa looga hadlayaa sidoo kale sida ugu haboon ee gurmad deg deg ah loo gaarsiin karo dadka Soomaaliyeed ee Abaaraha halakeeyen.
Madaxweynaha Somaia Maxamed C/llahi Farmaajo, ayaa shir guddoomin doono Shirkaan, waxaana Warbixin la xiriirta xaalada Abaaraha dalka ka taagan laga dhageysan doonaa Maxamed Cumar Carte oo ah Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka, sidoo kalena madax ka ah Guddiga Gurmadka Abaaraha ee
Shirkaan waxaa horey u iclaamiyay Madaxweynaha Somaiya Maxamed C/llahi Farmaajo, kadib markii uu kulamo la qaatay mas’uuliyiinta sare sare oo qaramada midoobay ka socdayMuqdisho
Feebaraayo 28, 2017 Maamul Goboleedka Galmudug ayaa lagu wadaa in uu wada-hadal la furo Maamulka Gobolada Dhexe ee Ahlusun Waljameeca oo siyaasad ahaan aan la dhacsaneen Maamulka Galmudug oo si KMG ah ugu shaqeynaya Cadaado.
Xildhibaan Duraan Cali jaamac oo kamid ah baarlamaanka Maamulka Galmudug ayaa sheegay in wada-hadal ay la furi doonaan Maamulka Ahlusuna
Xildhibaanka ayaa sheegay in Ahlusuna laga qancin doono waxa walba ay
ka tabanayaan Maamulka Galmudug oo 19-kii bilood aynu soo dhaafnay uu hogaaminayay C/kariin Xuseen Guuleed oo todobaadkaan gudihiisa ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaas.
Dhanka kale Xildhibaan Duraan Cali jaamac oo kamid baarlamanka Galmudug ayaa ku baaqay in loo gurmado dadka ku nool deeganada ay maamulaan ahlusuna Waljameeca ay xiligaan ka jirto abaar tii ugu xumeydMuqdisho
Feebaraayo 28, 2017 Degmada waabari Gobolka Banaadir ayaa ku waramaya in goordhaweyd agagaarka Xarunta UNICEF uu ka dhacay qarax xoogan.
Qaraxa ayaa la xaqiijiyay in uu ku xirnaa gaari uu watay mid ka mid ah Ganacsatada Soomaliyeed, oo isla durbadiisa halkaas ku geeriyooday.
Ma Cadda qofka saarnaa gaariga iyo halka uu u shaqeynayay, hase ahaatee waxaa lagu soo waramayaa in gaariga uu bur bur xooggan soo gaaray.
Ciidamada ammaanka Dowladda Soomaliya ayaa goobta gaaray, kuwaasoo wada baaritaano la xiriira qaraxan ka dhacay Degmada WaabariWARARKA MAANTA Feebaraayo 27, 2017 Su'aasha Maanta: Mudane Madaxweyne Farmaajo, ma waxaad umalaynaysaa shaqsi dembi-baaris caalami ah lagu furay inuu rajo fiican u keeni doono Soomaaliya haddii aad u magacaawday Raysal Wasaare? Ma u malaynaysaa inay labada gole ee Dowladda Cusub ansixin doonaan shaqsi tuhun weyn ay gelisay bulshadda caalamka ee uu la soo shaqaynayey? Waxaan kuu ballanqaadaynaa inaysan bulshadda caalamka iyo hay'addo farabadan aysan wax dhaqaallo ah siin doonin dadka iyo dalka Soomaaliya waayo shaqsigan aad magacaawday wixii ay Qaramadda Midooway ka qoreen waad ogaatay, waxaan kuu caddaynaynaa inuu wax deyn ah aysan Soomaaliya ka heli doonin bangiga caalamiga iyo hay'addo kale oo dowladdeed oo farabadan. Rajadii shacabka Soomaaliyeedna hadda waxaad dhumisay 60%, waxaana ka war sugi doonaa wixii intaas soo raaca.https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/regional-risks-somalias-moment-hopeMuqdisho
Feebaraayo 27, 2017 Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Xukuumadda Soomaliya ayaa wada kulamo gaar gaar ah oo ah Wadatashi uu kala sameynayo Xildhibaanada Xukuumadda uu soo Magacaabi doono.
Mr Xasan Cali Kheyre ayaa ku qancinaya Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya in ay Ansixiyaan si uu u soo Magacaabo Golo Xukuumad oo tayo leh.
Shalay ayaa waxa uu Ra’iisul Wasaaruhu Muqdisho kula kulmay Xildhibaannada laga soo doortay Maamulka Hirshabelle sida uu Idaacadda Shabelle u xaqiijiyay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Si kastaba Ra’iisul Wasaaraha Cusub ayaa hortagi doono Golaha Baarlamaanka Soomaaliyeed si uu Kalsoonidoda u weydiisto.Muqdisho
Feebaraayo 27, 2017 Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka dalbaday dhex dhexaadnimo ay ka sameyso Sacuudiga sidii ay ugu qancin lahayd dowladda Isku taga Imaaradka Carabta in aysan dhamaystirin saldhig militry ay ka dhisato Dekada Barbera ee maamulka Somaliland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka faaideysanaya xirirka adag ee u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaradka si Imaradka uga tanasulo saldhiga Militery ee Berbara ka hirgalainayo.Muqdisho
Feebaraayo 27, 2017 Inta la ogyahay Sedex ruux ayaa ku Geeriyootay dabkii Saakay aroortii
ka kacay Suuqa weyn ee Bakaaraha Oo ay Gubteen Qeybo kamid ah Suuqaasi.
Waxana lagu Guuleystay Daminta Dabkaasi oo aad u xooganaa Sida ay Xaqiijiyeen qaar kamid ah Ganacsatada Suuqa weyn ee Bakaaraha.
Daminta Dabkaan ayaa la sheegay in ay ka qeybqaateen dabdmisyo farbadan iy ciidamada Amaanka oo iyagu sugayey Amaanka goobaha ay kasocotey baqtiinta dabkaasi weynaa ee baa’ bi iyey qeybo badan o suua ka mida.Boosaaso Feebaraayo 27, 2017 Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi xalay ciidamo ka tirsann Puntland lagu weeraray Bam gacmeed Khasaare geystay.
Sidoo kale Magaalada Boosaaso ayaa xalay laga maqlay Rasaas dhaceysay Muddo ka badan 30 daqiiqo.
Ammaanka Magaalada Boosaaso ayaa Saakay aad loo adkeeyay waxaana wadooyinka lasoo dhoobay ciidamo ka tirsan kuwa Puntland.Muqdisho
Feebaraayo 27, 2017degmada Wartanabadda ee gobolka Banaadir gaar ahaan Xaafadda Cali Kamiin ayaa waxaa ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay rasaaseeyeen Gaari ay saarnaayeen dabley hubeysan.
Ciidamada dowladda ayaa ka shakiyay Gaariga ay saarnaayeen dabley hubeysan , waxaana ay ku fureen Xabado.
Ciidamada dowladda ayaa dhaawacay mid ka mid ah dableydii hubeysnayd,
waxaana ay soo qabteen qori uu watay mid ka mid ah Dableydii Gaariga saarneyd.GalmudugFeebaraayo 27, 2017 Madaxweynahihii Dowlad Goboleedka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii Madaxweynenimada Galmudug Sababo la xariira xaga caafimaadkiisa ayaa xildhibaano ka tirsan Galmudug waxaa ay sheegeen in ay doonayaan in ay qaban qaabiyaan doorashada Madaxweynaha Galmudug.
Xildhibaan Faysal Axmed Cabdulle oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug ayaa sheegay in ay doonayaan in doorashada Madaxweynaha Galmudug in ay dhacdo 20 Bisha March ee sanadkaan 2017-da.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in doorashada ay qaban qaabin doonaan xildhibaanadii horay u sheegay in ay xilka ka qaadeen Madaxweyne Guuleed.
Waxaa uu xusay in Musharaxiin badan oo u taagan xilka Madaxtinimada Galmudug in ay soo gaareen Magaalada Cadaado.Muqdisho
Feebaraayo 27, 2017 Taliyaha Taliska Dhexe Milliteriga Maraykanka ee Afrika (US Africa Command), General Thomas Waldhasuer ayaa hadalkaasi sheegay, iyadoo ay Waaxd Gaashaandhiga Maraykanka doonayan in Awoodda loo kordhiyo Ciiddanka Maraykanka ee ku sugan gudaha Somalia.
Taliyahaasi waxa uu tilmaamay inay Maraykanka u arkaan Fusad muhiimn ah inay la shaqeeyaan Madaxweyne Farmajo, si loo tababaro Ciiddanka Ammaanka Somalia heer ay awoodi karaan inay qaadaan mas’uuliyadda Hawlgalladda ka dhanka ah Xarakadda Alshabaab, waa sida uu hadalka u yiri.
Hadalka Taliyahaasi ayaa yimid, iyadoo Aqalka Cad ee looga arrimiyo Maraykanka loo gudbiyey Codsi ku aadan in la kordhiyo Awoodda Ciiddanka Maraykanka ee Dagaalka ay kula jiraan Dagaalamayaasha Alshabab.
Awoodahaasi ayaa la sheegay inay ka mid tahay in la kordhiyo Tiradda Ciiddanka Maraykanka ka joogo Somalia iyo in Hawlgalladda noqdaan kuwo looga hortagayo Weeraradda ay Dagaalamayaasha Alshabaab la beegsadaan Ciiddanka Dowladda iyo kuwa Hawlgalka AMISOM.
Dadaalka lagu xoojinayo Awoodda Milliteri Maraykanka ee Somalia ayaa timid, iyadoo Mdaxweyne Donald Trump ka codsaday Pentagon-ka sidii loo ballaarin lahaa qorshaha Dagaalka Maraykanka ee ka dhanka ah Kooxda Daacish-ta ku sugan dalalka Syria iyo Iraq iyo sidii looga guuleysan lahaa Kooxaha kale, sida Alqaacida iyo Ururradda kale ee Isbahaysiga la leh
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Farmaajo oo ah Muwaadin haysta Dhalashadda Maraykanka ayaa sheegay inay ugu yaraan 20-sanno qaadan doonto sidii Somalia loogu soo celin lahaa Deganaanshaha iyo Xasilloonida dhamaystiran.
Somalia waxay ka mid tahay 7-da Waddan ee Muslimka ee uu Madaxweyne Donald Trump bishii hore ku soo rogay Xayiradda Socdaalka ee ay ku tegi jireen Maraykanka.Muqdisho
Feebaraayo 27, 2017Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka dalbaday dhex dhexaadnimo ay ka sameyso Sacuudiga sidii ay ugu qancin lahayd dowladda Isku taga Imaaradka Carabta in aysan dhamaystirin saldhig militry ay ka dhisato Dekada Barbera ee maamulka Somaliland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka faaideysanaya xirirka adag ee u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaradka si Imaradka uga tanasulo saldhiga Militery ee Berbara ka hirgalainayo kadib marki Barlamanka Somaliland ay ansixiyeen heshiiska Somaliland iyo imaaradka ee quseeya dhismaha saldhiga taa oo ay madaxda Soomaaliya ka carootay kuna tilmaamen inaysan ahayn mid sharci ahMuqdisho
Feebaraayo 27, 2017Gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimacaale ayaa Gaaray Suuqa weyne ee Bakaaraha , halkaasi oo uu ka socdo dab xooggan.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku baaqay in la furo wadooyinka waa
weyn ee soo gala Suuqa Bakaaraha, Maadaam ay doonayaan in ay badbaadiyaan hantida ku gubanaysa Suuqa Bakaaraha.
Dabkii ka kacay Suuqa Bakaaraha saaka salaadii Subax, ayaa weli ka socda Suuqaasi, waxaana uu ku sii fidayaa goobo hor leh oo ganacsi, kuwaasi oo saameyn ballaaran uu ku yeelanayo dabka.
Dabka ayaa markii hore wuxuu ka kacay Suuqa Khaliifa ee ku dhex yaalo
Suuqa Bakaaraha, wuxuuna dabka ku fiday, qaybta Maacuunta, qaybta Malabka, Qaybta Dahablaha, hadana waxaa la soo sheegayaa dhanka Sarta Cali Dheere dabka inuu ku sii fidaayo.
Dabkii ka kacay Suuqa Bakaaraha saaka salaadii Subax, ayaa weli ka socda Suuqaasi, waxaana uu ku sii fidayaa goobo hor leh oo ganacsi, kuwaasi oo saameyn ballaaran uu ku yeelanayo dabkaWARARKA MAANTA Feebaraayo 24, 2017 Sir Culus Su'aasha Maanta: Madaxweyne Mudane
Farmaajo, ma waxay kula tahay inay saxan tahay soo magacaabida Raysal
Wasaare khaa'inul waddan ah oo dembi-baaris weyn ku socoto taasoo
Guddiga Dembi-Baariska Qaramadda Midooway ee Soomaaliya U qaabilsan
Iyo Hay'adda Dalka Ingiriiska u qaabilsan daba-gelka musuqmaassuqa
khatarta ah ee “United Kingdom's Serious Fraud office (SFO)” ay
si weyn wali u baarayaan dembiyadda uu gelay Raysal Wasaarahan
hoggaamin doona Dowladda Wada Dadban? Qosolka adduunka ninkan Raysal
Wasaaraha cusub loo magacaabay ayaa horay waxuu xilka soo qabtay
shirkadda Soma & Oil Company oo ay aasaaseen niman cadaan ah
kuwaasoo heshiisyo qarsoodi ah la galay shirkaddo kale iyo dowladdo
kale marka haddii uu haatan iska-casilay waxaa weli cad in lagu
daba-joogo ama la baarayo dembiyadda uu horay u gelay balse waxaa
labada gole laga ee xilidhibaanada iyo Ummadda Soomaaliyeed laga
sugayaa inay ka fiirsadaan shaqsi si aysan u burburin Dowladda Wada
Dadban oo haatan saaran bohol culus oo aan laga soo qaban doonin.
Mr. Khaakhaan oo tallo u soo jeediyey
Madaxweynaha Jamhuuriayada Federaalka
Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta soo
cumreysanaya, kahor inta aanu booqan Magaalada Madiina Al-munawara oo
uu ku yaallo Qabriga Nabigeena Muxamad (NNKH).
Feebaraayo 24, 2017 Wafdi
uu hoggaaminayo Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya
Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shalay gaaray
waddanka Sucuudiga, kaddib markuu caasumaad rasmi ah ka helay boqorka
Sucuudiga Boqor Salman Bin Cabdulcaziz Aala Sucuud.
Madaxwaynaha ayaa kulan la qaatay Boqorka Sucuudiga Boqor Salmaan
Binu Cabdicasiis iyo dhaxal sugaha koowaad ee Boqortooyada Amiir
Maxamed Bin Naa’if iyo qaar ka mida golaha Wasiirada Sacuudiga,
waxayna labadan masuul ka wada hadleen, xoojinta xiriirka ka dhaxeeya
labada dal iyo iskaashiga dhinacyada Amniga, dhaqaalaha, Siyaasada
iyo Arimaha Bulshada.
Warbixinta warkan waxaa Dalka Sacuudiga inooga soo diray
Wariyaheena C/qaadir Qeyska.
Feebaraayo 24, 2017Afhayeenka
xisbiga Fremskrittspartiet FrP ee (cunnsuriyiinta) Mazyar Keshvari
ayaa soo jeediyay in baasa-boorka Norwegian-ka laga qaaddo Ra’iisul
wasaarraha cusub ee Soomaaliya Hassan Kheyre. Sida lagu
qoray wargeyska NK waxaa Sababta ay ku sheegeen mucaaradka in
baahidii loo siiyay meesha ay ka basday oo isku dhiibay inuu
maganlgalyo doon aha balse hada uu noqday Ra´sal wasare iyo inu
sharciga heysashada labada dhalasho ay dalkaas mamnuuc ka tahay (dual
Lama oga sida ay talo soo jeedinta xisbiga mucaaradka u sameyn
doonto Kheyre waxaase la sheegayaa in mucaaradka dalkaas ay
xooganyihiin oo ay socodsin karaan aragtidooda.
Feebaraayo 24, 2017Farmaajo ayaa si toos ah ugeli doona
Kacbada, isagoo gudanaya Acmaasha Cimrada, wuxuuna halkaasi ku
sugnaan doonaa dhowr saacadood oo ah inta uu soo dhameysanayo
Cibaadada, sida ay soo sheegayaan Wariyeyaal halkaasi ku sugan.
Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) Madaxweynaha Jamhuuriayada
Federaalka Soomaaliya ayaa booqashadiisa kadib waxa uu dib ugu soo
laaban doonaa Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Wadooyin badan oo ku yaalla Magaalada Riyaadh waxaa lagu xardhay
Calanka Soomaaliya oo ku lamaaneysan Calanka Sacuudiga, taas oo looga
gol lahaa soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya.
Dhanka kale Madaxwaynaha ayaa kulan la qaatay Boqorka Sucuudiga
Boqor Salmaan Binu Cabdicasiis iyo dhaxal sugaha koowaad ee
Boqortooyada Amiir Maxamed Bin Naa’if iyo qaar ka mida golaha
Wasiirada Sacuudiga, waxayna labadan masuul ka wada hadleen, xoojinta
xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo iskaashiga dhinacyada Amniga,
dhaqaalaha, Siyaasada iyo Arimaha Bulshada.
Feebaraayo 24, 2017 Ra’iisul Wasaaraha cusub ee
Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa iska casilay xilkii uu ka hayay
shirkadda Soma Oil and Gas, kadib Qoraal ay soo saartay shirkadaasi
oo ay ku cadeyneyso warkan.
Xasan Cali Khayre Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa
ahaa Agaasimaha fulinta Afrika ee shirkadda Soma Oil and Gas, waxaana
is casilaadiisa ay timid, markii loo magacaabay in uu noqdo Ra’iisul
Waxa uu shirkaddan ku lahaa Mudane Khayre saami dhan 1.1%, kaas oo
u dhigma 2 Milyan oo Dollar, isagoo sidoo kale iska casilaya kana
baxaya Guddiga sare ee maamula shirkadda Soma Oil and Gas.
Mr. Xasan Cali Kheyre Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaliya ayaa
ah nin dhalinyaro ah oo 49-sano jir ah, isagoo la soo shaqeeyay
Hay’addo Caalami ah oo Qaramada Midoobay hoostaga, waxa uu sidoo
kale ahaa shaqsi si dhow ula socday siyaasadda Soomaliya sanadihii
aynu soo dhaafnay
24, 2017 Booliska Dalka Kenya ayaa baaritaano
ku haya toogashada bahalnimada ah ee shalay loo geystay 3 Qof, kaas
oo ka dhacay Hotel Iqlaas oo ku yaalla Magaalada Gaarisa Gobolka
Waqooyi Bari ee Dalka Kenya, gaar ahaan meel ku dhow soohdinta
Waxa ay sheegeen Booliska dadka la toogtay
dhamaantood in ay ka shaqeynayeen Hotelka, ayna yihiin dadka
Degaanka, sidaasi darteedna ay wadaan baaritaano lagu raadinayo
raggii ka dambeeyay dilkan.
Guddoomiyaha Magaalada Gaarisa James Kianda
oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa sheegay in mid ka mid ah
dadka la toogtay dhaawac ahaan goobta looga qaaday, hadana uu ku jiro
Isbitaal ku yaalla Magaalada Gaarisa, si xaaladiisa caafimaad loogu
dadaalo.“Waxa ay aheyd dhacdadan mid naxdin badan, waxaan ku
boorinayaa xubnaha ka tirsan dadweynaha in ay feejignaan dheeri ah
galaan, maadaama aan la ogeyn xilliga ay weerarka soo qaadayaan
Dableyda dilalka geysata, Booliska ayaa baaritaano wada” Sidaasi
waxaa warbaahinta Gaarisa u sheegay James Kianda.
Sidoo kale Guddoomiyaha Magaalada Gaarisa James Kianda ayaa
sheegay weerarkan in uu u badinayo in ay fuliyeen jihaadistayaal ka
tirsan ururka Al-shabaab, maadaama nimanka weerarka fuliyay madaxyada
ay ugu duubnaayeen maryo.
ayaa inta badan waxa ay weeraro iyo dilal toos ah ka fuliyaan
Magaalada Gaarisa, waxaana weerarkii ugu dhimashada badnaa ee
halkaasi ka dhaca uu ahaa midkii jaamacada Gaarisa, kaas oo dhacay
2-dii April 2015-kii, waxaana ku dhintay 148 Qof
Feebaraayo 24, 2017 waxaa magaalada laascaanood caasimada
dawlad goboleedka khaatumo ka dhacay shir balaadhan oo ay soo qaban
qaabiyen bulshada caasimada. Shirka ayaa u jeedkiisu ahaa baaq loo
diraayo beelaha Khaatumo Cabdi garaad Qayaad iyo maxamed garaad
baharsame in ay joojiyaan Dhiiga sokeeye daadanaya. Muqdisho Feebaraayo 24, 2017 Taliyaha
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Generaal Maxamed Xasan Xaamud ayaa ka
shalaayay hadal uu ku taageeray Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan
Sheekh Maxamuud, intii uu socday ololihii Doorashada Madaxweynaha.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sareeya Gaas Maxamed Shiikh
Xasan Xaamud oo oo bishii December ka hadlay Munaasabada 73-guuradii
kasoo wareegtay markii la aas aasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed
ayaa qarsan waayay taageerada uu u hayay Xasan Sheekh
”Madaxweyne codka saraakiisha booliiska adigaa iska leh oo ku
tashanaya, Waxaa saraakiisha booliiska labada Aqal kamid noqday ku
jira Generaal Cabdi Qeybdiid oo Aqalka sare ku jira, Taliyihii hore
ee ciidanka booliiska Shariif Sheekhunaa Maye oo isna Aqalka hoose
kamid ah iyo Labo Xidigle dhawaan booliiska kusoo biiray Maxamed
Ibraahin Diyeeshe oo isna Aqalka hoose kamid noqday, Codadka
saraakiishaas adigaa iska leh oo ku tashanaya” Ayuu yiri Taliyaha
Taliye Xaamud ayaa sheegay in si qaldan loo fasiray hadalkaasi uu
ku taageeray Madxaweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh, waxa uuna
tilmaamay xiligii uu hadalkaasi ka dhawaajinayay in uu aad u
”Warka sidaan u iri iyo sida loo fasiray isku mid maahan ,
hadalkan aan ku taageeray Xasan Sheekh waxaa iga keentay farxad,
waxaana maalintaasi ku dhacay hadal qadaf ah” Ayuu yiri taliyaha
ciidanka booliiska Soomaaliya.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aamnisanaa in mar kale
dib loo dooranayo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib kala xumaatay
hadalkii uu ku taageeray, waxa uuna muujiyay sida uu hada uga xun
yahay hadalkasai kasoo yeeray.
Hadalkaasi uu ku taageeray Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya
Madaxweynihii hore ayaa sabab u noqday in doorashada Madaxweynaha aan
lagu qaban xarunta Iskool buluusiya oo horey loo qorsheeyay in ay ka
dhacdo, kadib markii Musharaxiin badan kasoo horjeesteen.
WARARKA MAANTA Feebaraayo 23, 2017 Muqdisho Feebaraayo 23, 2017 Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wafdi uu horkacayo
oo maanta gaaray magaaladas Riyadh ee dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa
kulan la qaatay boqorka dalkaas Salmaan Bin C/casiis.
Farmaajo waxaa kulankaasi ku wehliyey Wasiirka arrimaha dibedda iyo maalgashiga caalamiga, C/salaan Hadliye, La-taliyayaasha Madaxweynaham sida Fahad Yaasiin, C/risaaq Axmed, Agaasimaha Madaxtooyadda iyo Safiirka Somalia u jooga Scuudiga, Daahir Maxamuud Geelle.
Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihin
xiriirka labada wadan, Iskaashiga gobolka ee la-dagaalanka Xuutiyiinta iyo taageeradda Sacuudiga ee dowladda Federalka ee dhinacyadda Siyaasadda, dhaqaalaha, Ammaanka iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka ku macluulsan gudaha Somalia.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu kulamo kale la qaato madaxda
Sacuudiga ka hor inta uusan u soo gudbin magaalada barakeysan ee Makka Al-Mukarama oo ku soo gudan doono cimrada.
Feebaraayo 22, 2017Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa magacaabay Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya[ waxa uu u magacaabay Xasan Cali Kheyre, waxaana maalmahan hadal heyntu ay aheyd xilliga la magacaabayo Ra’iisul Wasaaraha.
Warkan waxaa Idaacadda Risaala u xaqiijiyay Ilo wareedyo muhiim ah oo ka akdhow Madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa saakay u duulay wadanka Sacuudiga, waxaana Garoonka Diyaaradaha ku sii sagootiyay xildhibaano ka tirsan labada Gole
ee Dowladda Federaalka.
Maalinimadii shalay aheyd ayaa Madaxweynaha Soomaaliya waxaa lagu Caleemo saaray Magaalada Muqdisho, waxaana Munaasabadaasi ka soo qeyb galay Madax ka tirsan dalka Afrika. https://www.youtube.com/watch?v=tlriFdNUDe8&feature=youtu.beMuqdisho
Feebaraayo 22, 2017 Wasiirka arrimaha dibadda ee Maksiko ayaa sheegay in aysan ka labolabayn doonin difaaca xuquuqda aadanaha
Dawladda Maksiko ayaa cambaaraysay hannaan cusub oo uu soo saaray Maraykanku kaas oo lagu musaafurinayo dadka aan sharciga haysanin ee soogalootiga ah.
Qorshaha uu soo bandhigay maamulka Trump Arbacadii ayaa lagu musaafurin karaa qof kaste oo si sharci darro ah ku jooga dalkaas.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Maksiko Luis Videgaray ayaa sheegay in dalkiisu uusan aqbali doonin “go’aan kaste oo dawlad kale iskeed u qaadato”.
Murankan ayaa yimid iyadoo labo sarkaal oo sarsare oo Maraykan ah ay qorshaynayaan in ay booqdaan Maksiko.
Aqalka Cad ee looga rrimiyo dalka Maraykanka ayaa sheegay in wasiirka
arrimaha dibadda Rex Tillerson iyo wasiirka amniga gudaha John Kelly ay
saraakiisha Maksiko kala hadli doonaan ayna ka wada shaqayn doonaan sidii loo dhaqan gelin lahaa shuruucda cusub ee laanta socdaalka.Kelly ayaa la kulmi doona saraakiil aad uga soo horjeeda qorshihiisa
Waxaa ka mid ah qorsheyaal lagu dhaqan gelinayo sharciyo haddda jira oo la xiriira arrimaha socdaalka Maraykanka iyo jinsiyadda kaas oo xukuumadda u ogolaanaya in ay Maksiko u masaafuriso dadka soo galootiga ah iyado aan la fiirinaynin meesha ay ka yimaadeen asal ahaan.
Ma cadda in Maraykanku uu awoodo in uu dawladda Maksiko ku qasbo in ay aqbalaan ajaaniib.
Laakiin Videgaray ayaa sheegay Arbacadii in aysan aqbali doonin sababtuna ay tahay in aysan la gudboonayn wax dan ahna aysan ugu jirin arrintaas.c Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi (Farmaajo) ayaa sheegay in Dowladiisa ay ku dadaaleyso nabadeynta Magaalada Gaalkacyo.
Waxa uu sheegay in beelaha dega Magaalada Gaalkacyo ay heshiis rasmi ah kala dhex dhigi doonaan islamarkaana uu ka shaqeyn doono nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha Soomaliyeed.
Waxa uu sidoo kale sheegay in uu ku dadaalayo in colaad kale aysan ka
dhex bilaaban beelaha Soomaaliyeed, isagoo sheegay in aysan suurta gal ahayn in weli ay kala qeybsan yihiin ayna ka shaqeyn dooonaan isku soo dhawaanshaha beelaha soomaaliyeed.
Dhanka kale Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dajin doonto Siyaasad Cad oo ku Wajahan Abaaraha daran ee Dalka ka jira, Waxa uu sidoo kale sheegay in ay ka shaqeyn doonaan ka hor taga Abaaraha ayna ka
shaqeyn doonaan u gurmashada dadka Soomaaliyeed.Qaramadda Midooway Feebaraayo 22, 2017 Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa Arbacadi shalay ka digay in 20 Milyan oo ruux oo ku nool afar wadan oo ay Soomaaliya ku jirto ay qarka u saaran yihiin macluul, hadii aysan Bulshada Caalamka ka hortagin arrintaasi.
Dhinaca kalana, bayaan Arbacadii shalay si wada jir ah ay magaalada Muqdisho uga soo sareen Madaxweynayaasha Soomaaliya, Djibouti, Kenya iyo
Ra’isulwasaaraha Ethiopia, ayaa si cad loogu qeexay xaaladda ay ku jiraan kumanaan qof oo Soomaali ah oo ay saamaysay abaarta daba dheeraatay oo keentay macaluul dadka qaarkoodna ay nafaqo darro iyo cuduro is biirsaday u dhimanayaan.
Madaxdan ayaa bayaankooda ku saleeyay baaq ay u dirayaan Beesha Caalamka si loogu soo gurmado dadka ay waxyeeladu gaartay.Muqdisho
Feebaraayo 22, 2017 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saakay ka duulay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, isagoo ku sii jeeda dalka Sacuudiga, Kadib markii uu marti qaad ka helay Boqorka Sacuudiga.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa Garoonka Diyaaradaha ku sii sagootiyay Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka, Xildhibaana qaar ee Labada Gole ee Dowladda, Saraakiil Ciidan iyo xubno kale.
Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisan noqonaya midkii ugu horreeyey ee
uu ku aado dalka dibaddiisa, tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay, isagoo halkaasi kula soo kulmi doona madaxda dalka Sacuudiga.WARARKA MAANTA Feebaraayo 22, 2017 Su'aasha
Maanta: Lacagta Caleema-Saarka maxaa biyo iyo cunto loogu gadi waayey Ummaddda Soomaaliyeed ee abaaruhu baabi'iyeen ayaga iyo xooloodaha? Maanta waxaa la caleemo-saarayaa Madaxweynaha Cusub ee Dowladda Wada Dadbana Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ay Ummadda Soomaaliyeed ka sugayso inuu soo magacaabo Raysal Wasaare Cusub oo soo dhisi doona Golaha Wasiiradda ee Dowladda Wada Dadban haddii Alle Idmo!https://www.youtube.com/watch?v=WCYmiN48vNAMuqdisho
Feebaraayo 22, 2017 Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhow ka soo degay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqidsho.Wafdiga
Madaxweynaha waxaa Garoonka Diyaaradaha ku soo dhaweeyay Xildhibaano ka
tgirsan Labada Gole ee Dowladda Federaalka, Guddiga qaban qaabada xaflada Caleemo Saarka Madaxweynaha, Saraakiil Ciidan iyo xubno kale.Ismaaciil
Cumar Geelle Madaxweynaha Dalka Jabuuti ayaa ka qeyb galaya xaflada Caleemo Saarka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo oo maanta ka dhaceysa Magaalada Muqidsho.Sidoo
kale goor dhow waxaa Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ka soo degi doona wufuud caalami ah, kuwaas oo ka qeyb galaya xaflada Calemo Saarka Madaxweynaha.Muqdisho
Feebaraayo 22, 2017 Hay’adaha Q.M. ayaa ka dalbanaya deeq bixiyayaasha caalamiga ah lacago si loogu dar dar galiyo howl gallo caawimaad naf bad
baadin ah oo laga sameeynayo goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ee dalalka
Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaas oo malaayiin qof oo gaajeysan ay qarka
u saaran yihiin geeri iyo xanuuno kale, sida aya hay’aduhu ku warameen.Shan
sano ka dib, Abaartii ba’aneyd ee Soomaaliya ku dhufatay 2011, taas oo dishay dad lagu qayaasay 260 kun oo qof oo Soomaali ah, ayaa markale waddanku wuxuu dhexda uga jiraa musiibo abaar kale oo daran.Meelaha
ugu darran ee ay abaaruhu ku dhufteen ayaa kala ah deegaanno ka tirsan Puntland iyo Somaliland, halkaas oo durba laga soo warinayo dhimasho iyo
xanuuno ka dhashay macluusha.Afhayeen
u hadlay hay’adda Q.M. u qaabilsan qaxootiga, Leo Dobbs, aya sheegay in
ay Axaddii ka war heleen warar sheegaya in 38 qof ay dhibaatooyin abaaraha darteed ay ugu dhinteen gobolka Bakool.Q.M.
ayaa sheegtay in lix milyan iyo laba boqol oo kun oo Soomaali ah ay halis ugu jiraan abaaraha jira. Hay’adda Unicef waxay iyana tilmaamtay in carruurtu ay yihiin kuwa ugu jilicsan ee ay abaartu halista ugu jiraan.Muqdisho
Feebaraayo 22, 2017Ra’iisul Wasaaraha Dalka Ethiopia Hailemariam Desalegn iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa iminka soo gaaray magaalada Muqdisho, si uu uga qeyb galo xafladda lagu maamuusayo caleema saarka Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa ka mid ah wafuudda lagu casuumay inay ka soo qeyb galaan xafladda lagu caleemo saarayo Madaxweyne Farmaajo, waxaana iminka garoonka ka socda soo dhaweynta wafuudda heerka caalami ee ka soo qeyb galaysa xafladda lagu maamuusayo caleemo saarka Madaxweynaha.Muqdisho
Feebaraayo 22, 2017 Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa haatan
kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Uhuru Kenyatta
oo la filayay inuu ka baaqan doono safarkiisa ayaa goordhow waxaa ay diyaarad qaas ah keentay magaalada Muqdisho.Madaxweynaha
Kenya ayaa Muqdisho uyimid ka qeyb galka xaflada caleemo saarka madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo.Ra’isul
Wasaarre ku xigeenka DF Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha Kenya oo kusoo biiray madax horey utimid Muqdisho oo ay kamid yihiin madaxweynaha Jabuuti Ismacil Cumar Geelle iyo ra’isul wasaaraha Itoobiya
Feebaraayo 22, 2017 Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo madax ka ah qeybta
Joqraafiga, bii’ada, iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Maraykanka sidoo kalana dhawaan ahaa guddoomiyihii guddigii Ansharaxa Doorashada ayaa sheegay in Guddigoodu qaban waayay musuq iyo lacago lagu bixiyay doorashda. Prof-ka ayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
ka codsata inuu geedsinimo muujiyo is markaasna uu qirto wixii dhacay iyo laaluushkii la bixiyey sidoo kalana uu dadka cafis weydiisto.Cabdi
Ismaaciil ayaa sheegay haddii uusan Farmaajo sidaas sameyn ay aamini doonaan in wax la hoosaasiyey intii ay socotay doorashadii dalka ka dhacay.Hadalkaan ayuuu Cabdi ismaaciil ka sheegay barnaamij ka baxayey idaacadda VOA gaar ahaan qeybteedsa ku hadasho afka Soomaaliga.Ugu
dambeyntii wuxuu soo jeediyey inaan dowladda cusub lagu dhisin hanaanka
qabiilka, isagoo ka dhawajiyey haddi dowladdaan fashilmato ay Soomaaliya dhan fashilmatay.WARARKA MAANTA Feebaraayo 21, 2017Raysal Wasaare Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa noqon doona Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo horay u soo noqday Taliyaha Hay'adda Nabad-Sugidda Qaranka, Soomaaliya waxay u baahan tahay waddani geesi ah oo cadowga sokeeye iyo kan shisheeyeba la xisaabtami kara kaasoo u shaqayn kara Ummadda Soomaaaliyeed.Su'aasha Maanta: Madaxweyne Mudane Farmaajo, Shacabaka Soomaaliyeed ma rabaan inay Taliyayaasha Ciidanka Xoogga Dalka ay siyaasadda faraha la galaan sida uu Taliyaha Ciidanka Booliska Sareeye Gaas Maxamed Shiikh Xaamud uu faraha u la galay xilligii ay soctay ololaha doorashadda Madaxweynaha Soomaaliya? Waa run inuu xad gudub weyn sameeyey Taliyaha Ciidanka Booliska Sareeye Gaas Maxamed Shiikh Xaamud markii uu si bareer ah u sheegay xildhibaanno katirsanaan jiray iyo kuwa hadda ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliya inay u codeeyaan Madaxweynihii hore Mudane Xassan Shiikh Maxamuud oo ay Ummadda Soomaaliyeed ka codsatay inuu shaqada iskaga tago maadaamo 4 sanno waxba ku qaban waayey. IMF Feebaraayo 21, 2017 Hadal ka soo baxay Hay’adda Lacagaha Adduunka (The International Monetary Fund) ee IMF ayaa lagu sheegay in laga yaabo inay Deyn-bixiyayaasha Somalia ka cafiyaan Deymaha lagu leeyahay oo dhan 5.3 Billion oo Dollar.
Waxa uu sheegay inay jirto Rabitaan Guud oo ka imaanaya Deyn-bixiyayaasha oo doonaya inay cafiyaan Deynta lagu leeyahay Somalia,
isla markaana ay taasi tahay Rajo Wanaagsan.
Dalkeenna Somalia waxa uu ka mid yahay Dowladihii ugu dambeeyey ee ay
Hay’adda IMF iyo Bangiga Adduunka ka qafiifiyeen Daymaha lagu leeyahay dalalka ugu saboolsan Caalamka ee aan iska bixin karin Deymaha culus ee lagu yeeshay.
Waxa uu xusay in Lacagaha haatan ku jira Suuqa ay 98% yihiin kuwo been abuur ah oo aan sharci ahayn, wuxuuna tilmaamay in 2% Lacagta laga isticmaalo Somalia tahay mid sax ah oo la daabacay sannadkii 1991-kii.Muqdisho Feebaraayo 21, 2017 Xarunta Madaxtooyadda Villa Somaliya xalay waxaa ka dhacay kulan xasaasi ah oo dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) iyo Odayaal, xidhibaanada labada gole ee beesha Habargidir kaasi oo loogu hadlayay Arrimo dhowr.
Xubnaha la kulmay Madaxweynaha Soomaliya Farmaajo ayaa si weyn ugu hadlay sida loogu baahan yahay in dalka uu isbadal ka dhaco islamarkaana
Jagada Raisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaliya loo dhiibo beesha Habargidir,madaama aysan xilkaan qabanin muddo aad u fog.
Xubnahaan ayaa dowladii Xasan Shiikh maxamuud uu waqtigeeda dhamaaday
marar dhowr ah kala hadlay sidii loo sii deyn lahaa Hogaamiyihii Hore ee ururka Xisbul Islaam islamarkaana markii dambe shabaab ku biiray Shiikh Xasan Daahir aweys.
Sheekh Xasan Daahir Aweys, ayaa gacanta Dowladda Somaliya soo galay daba yaaqadii bishii June ee sanadkii 2013-ka, tan iyo xilligaas waxa uu
ahaa mid lagu hayay xabsi guri iskastoo xaalad caafimaad dhowr jeer loogu qaaday dalka Qatar.Washington DC Feebaraayo 21, 2017 Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa lataliyihiisa ammaanka qaran u magacaabay jeneraal HR McMaster, kaasoo bedeli doona jeneraal Michael Flynn.
Weriyayaasha ayaa sheegaya in jen. McMaster uu caan ku yahay soo bandhigidda aragtidiisa.
Jariirada Time ayaa sanadkii 2014 ku dartay liiska boqolka qof ee ugu saameynta badan caalamka.
Ninkan loo magacaabay lataliyaha ammaanka qaran ayaa sheegay in uu ka mahadcelinayo fursadan la siiyay.Muqdisho Feebaraayo 21, 2017 Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo 47-sano guurada ka soo wareegatay aas aaska ciidanka Asluubta.
Munaasabadaan ayaa waxaa ka qeyb galay madax ka tirsan dowladda iyo baarlamanka Soomaaliya oo ka mid yahay guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan
Jawaari, iyo taliyeyaasha ciidamada.Hargaysa Feebaraayo 21, 2017 Ciidamada Ammaanka maamulka Somaliland ayaa xalay Xabsiga dhigay Agaasimaha Tv-ga Madaxa banaan Startv oo Fadhigiiso yahay Magaalada Hargeysa ee Somaliland.
Agaasimaha la xiray ayaa lagu Magacaabaa Maxamed Baashe Xaaji Xasan.
Agaasimaha Tv-ga ayaa lagu eedeeyay in uu Abaabulay kulan Sharci daro ah oo aysan ogeyn maamulka Somaliland.
Sidoo kale Wararka naga soo gaaraya Magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in Agaasimaha uu si weyn uga hadlay arinta ku aadan Saldhiga dowladda Imaaraadka carabta ay ka furanayso Magaalada Berbera ee Somaliland.
Somaliland ayaa maalmihii lasoo dhaafay xiraysay Wariyeyaasha ka howlgala degaanadeeda , waxaana ay ku amartay Wariyeyaasha in aysan warbixin lafa gurid ah aysan ka sameyn karin Saldhiga dowladda Imaaraadka Carabta.Garoowe Feebaraayo 21, 2017 Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa Maanta Xarun Cusub ka furatay Magaalada Garowe, waxaana Furitaanka Xarunta Cusub ka qeyb Madaxweyne Kuxigeenka Puntland iyo Taliyaha Hay’adda Socdaalka G.sare Koofi oo si wadajir ah Xariga uga jaray Xarunta.UN Security Council Feebaraayo 21, 2017 Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa waxaa ay sheegeen in ay kordhin doonaan dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ,islamarkaana ay dadaallo dheeri ay ku bixin doonaan sidii loo adkeyn lahaa Ammaanka iyo Xasiloonida Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa ay tilmaameen in Awooda Al-Shabaab ay daciiftay, islamarkaana loo baahan yahay in la tayeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
” Dalalka xubnaha ka ah golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey waxaa ka
go’an in ay taageero lixaad ah ay siiyaan Soomaaliya si looga guuleysto
Al-Shabaab , islamarkaana looga hortago Weerarada iyo Qaraxyada ay geysanayaan” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.
Ugu dambeyntii Warka kasoo baxay golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey
ay si weyn loogu cambaareeyay Qaraxii ka dhacay Xaafadda Kaawo-Godey ee
degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.Muqdisho Feebaraayo 21, 2017 Kooxo hubeysan ayaa xalay Degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir waxa ay ku dileen Allaha u naxariistee Nabadoon Cabdi Cumar Ibraahim, oo
kamid ahaa Ergadii xildhibaanada kasoo dooratay Magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaliya.
Ugu yaraan laba nin oo bistoolado ku hubeysnaa, ayaa gudaha u galay hoyga Nabadoon Cabdi Cumar Ibraahim, iyadoona ay halkaasi ku dhex dileen, dilka kadib ragiii fuliyay falka ayaa goobta isaga baxsaday sida
ay inoo xaqiijiyeen dad halkaas ku sugnaa.
Ciidamada ammaanka oo hawlgal aan buurnayn ka sameeyay goobtaasi, ayaa kolkii dambe isaga tagey, iyadoo aanay jirin cid la sheegay in ay u
soo qabteen dilka marxuumka.
Muqdisho Feebaraayo 21, 2017 Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “ Axmed Madoobe” ayaa Xalay Magaalada Muqdisho kula kulmay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Axmed Madoobe ayaa Madaxweyne Farmaajo marka hore ugu Hambalyeeyay guusha uu ka gaaray doorashadii ka dhacday Magaalada Muqdisho.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ku bogaadiyay in uu la yimaado isbadal iyo isla xisaabtan dhab ah.
Waxa uu sheegay in Maamulka Jubbaland ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan Madaxweynaha Cusub isla markaana ay diyaar u yihiin in dhinac
walbo ay ka shaqeeyaan.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo
ayaa Madaxweynaha Jubbaland ugu mahad celiyay sida wanaagsan ee uu ula soo shaqeeyay Madaxweynayaashii isaga ka horeeyay, Waxa uu sidoo kale ka
dalbaday in uu la shaqeeyo.
Waxa uu Madaxweyne Farmaajo ku amaanay Axmed Madoobe sida uu u hormarinta degaanada Maamulka Jubbaland iyo sida uu ugu qeyb qaatay nabadeynta degaanadaasi.
Dhanka kale Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “ Axmed Madoobe” ayaa sidoo kale kulan gaar ah la qaatay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Axmed Madoobe ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ku amaanay hormarka uu Dalka
gaarsiiyay iyo sida uu saaxiibka ula ahaa Madaxda Maamul goboleedyada Dalka ka jira.
Waxa uu Axmed Madoobe sheegay in Xasan Sheekh maxamuud uu ahaa hogaamiye wax badan dalka ka soo qabtay, isla markaana ku guuleystay dhismaha Maamul goboleedyada Dalka iyo nabbadeynta Dalka.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay in Madaxweynihii hore ee Soomaaliya loogu baahan yahay in uu si dhaw ula shaqeeyo hogaanka cusub ee Dalka.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “ Axmed Madoobe”
ayaa ah Madaxweynaha keliya ee Maamul goboleed ee aanan joogin hoolka ay ka dhaceysay doorashada Madaxweynaha.
Waxaana kulanka uu la qaatay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo midkii ugu horeeyay ee dhex mara labadaasi Masuul tan iyo markii Farmaajo loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya.
WARARKA MAANTA Feebaraayo 20, 2017Su'aasha Maanta: Maxay Shacabka Soomaaliyeed 92.8% u rabaa inuu Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaago u magacaawo Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo horay u soo noqday Taliyaha Hay'adda Nabad-Sugidda Qaranka oo uu wax badan ka qabtay amniga iyo la socoshada dhaqdhaqaaqa cadowga gudaha iyo kan dibaddaba. Waa xaqiiq haddii Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaago uu u magacaawo Xildhibaan Axamed Macallin Fiqi inuu noqdo Raysal Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliyeed, Soomaaliya waxay iska xorayn doontaa cadowga Soomaaliya ee u shaqaynaya Ethiopia iyo wixii daba-dhilif u ah dowladdaha deriska iyo kuwa shisheeyaha ah kuwaasoo caaddaystay inay jahwareeriyaan Ummadda Soomaaliya Insha Allaah! Soomaaliya ha noolaato! Muqdisho Feebaraayo 20, 2017 Madaxweynaha Somaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, ayaa waxaa uu caawa Isbitaalka Madiina uu ku booqday dadkii faraha badnaa, ee ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay Suuqa Kaawo Godey ee Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir. Qaraxan oo ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, ayaa waxaa ku dhimatay in ka badan 35 qof, iyadoo tiro kale oo intaasi ka badana ay ku dhaawacantay. Dhibane-yaashu waxay u badan yihiin rayid.
Muqdisho Feebaraayo 20, 2017 Madaxweynaha Somaliya oo u kuur-galay xaaladda dhaawacyada, ayaa waxaa uu sheegay in uu ka xun yahay dhibaatada ka soo gaartay qaraxa, isagoona ballanqaaday in dowladiisu ay gacan u fidin doonto.
Inkastoo aysan jirin cid weli sheegatay masuuliyadda qaraxa khasaaraha intaan le’eg gaystay, ayaa wuxuu hadana Madaxweynaha Somaliya
uu dusha kaga tuuray mintidiinta Ururka Al Shabaab.
Madaxweynaha Somaliya oo Saxaafadda kula hadlay Isbitaalka Madiina, ayaa waxaa uu Ururka Al Shabaab uu ku eedeeyay in aysan kala jecleen dhibaateenta shacabka iyo askarta dowladda, iyadoona uu hadafkoodu ku sheegay in ay wax uun dilaan.
Madaxweynuhu wuxuu shacabka uu ugu baaqay in ay soo sheegaan qaraxyada, iyadoo uu ballanqaaday in qofkii qarax soo sheegaa ay dowladdu siin doonto abaalmarin lacageed oo dhan boqol kun oo lacagta Mareykanka ($100,000).
Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), General C/laahi Gaafow Maxamuud oo ka barbar hadlaayay Madaxweyne Farmaajo, ayaa isna ballanqaaday in qofkii soo sheega bistoolad qof lagu
dilay, in la siin doono lacag dhan toban kun oo dollar.
Qaraxa nolosha badan galaaftay ee ka dhacay Caasimadda Muqdisho, ayaa
waxaa uu ku soo beegmaya, saacado uun ka dib, markii ay Shabaabku ku hanjabeen in ay la dagaalami doonaan Dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Gudoomiyaha Ururka Al Shabaab ugu magacaaban Gobolka Galgaduud, Xasan
Yacquub Cali, ayaa maanta sheegay inaanu Farmaajo waxba kaga duwanayn madaxdii isaga ka horeysay, isla-markaana ay la dagaalami doonaan.Muqdisho Feebaraayo 20, 2017 Taliyaha Hey’adda Sirdoonka iyo Nabad-Sugidda Qaran Jeneraal Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud, oo kamid ah mas’uuliyiin xalay booqday isbitaalada la geeyay dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxiii ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hey’addu ay leedahay meel ay shacbiga
kala soo xiriiri karaan sida Lambarka (991 NISA).
“Gobolka Banaadir waxaa kusoo batay dhowrkii maalin aynu soo dhaafnay
dilalka qorshaysan ay geysteen Al-shaabab, intooda badan waxaa lagu fuliyaan bastoolada, cidii xogtaa NISA usoo gudbisa waxaa lagu abaalmarin doon 10,000 oo Dollar”, ayuu yiri Jeneraal Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud.
Dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada iyo dilalka qorshaysan ay ka geystaan Magaalada Muqdisho, waxa wacad ku mareen in ay sii kordhin doonaa beegsiga dadka la shaqeeya Dowladda Cusub ee Soomaliya.Maamulka Hirshabelle Feebaraayo 20, 2017 Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa Maanta Magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Shabellaha Dhexe,waxaana uu u Magacaabay Axmed Meyre Makaraan oo horay u ahaa Guddoomiye Kuxigeenka Amniga Shabellaha Dhexe.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabsullaahi Cosoble ayaa sidoo kale sheegay in Saacadaha soo socda uu Magacaabi doono Golihiisa Wasiiradda.
Illaa Labo Jeer ayaa waxaa dib u dhac uu ku yimid soo Magacaabista Golaha wasiiradda Maamulka Hirshabelle.Muqdisho Feebaraayo 20, 2017 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Farmaajo, ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay u midoobaan arrinta qatarta ku ah,
waxa uu ballan-qaadey in dowladdiisa ay ku abaalmarin doonto qofkii soo
sheega Gaari walxaha qarxa lagu sameynayo 100,000 (Boqol Kun oo Dollar).
Dhinaca kale Taliyaha Hey’adda Sirdoonka iyo Nabad-Sugidda Qaran Jeneraal Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud, ayaa sheegay in hey’addu ay leedahay meel ay shacbiga kala soo xiriiri karaan sida Lambarka (991 NISA), sidoo kalena dadka Bistoolladaha dilalka ku geysta cidda xogtooda
keenta lagu abaalmarin doon 10,000 oo Dollar waa sida uu sheegay Taliyaha NISA.
Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda
Soomaaliya dhawaan ay qaadi doonaan howlgal ka dhan ah Al-Shabaab.Iraaq Feebaraayo 20, 2017 Ciidammada Ciraaq ayaa duqeeyay goobaha ay ku suganyihiin kooxda isku magacawda Dawladda Iskaamka ka hor inta aysan guulaha ka gaarin dagaalka ay la galeen kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka.
Ciidammada Ciraaq ayaa qabsaday tuulooyin kala duwan iyaga oo dagaal ku ekeeyay goobtii u dambaysay ee ay ku xoog badan tahay kooxda isugu yeerta Dawladda Islaamka oo ah qaybo
ka mid ah magaalada Mosul.
Boqolaal gawaarida milateriga ah oo gacan ka helaya duqaymo dhanka cirka ah ayaa ku jihaystay Axaddii goobo ay Dawladda Islaamku fariisimmo
Horumarka ay ka sameeyeen Axaddii koonfurta magaalada Mosul ayaa u sahashay in ay meel durugsan ka weeraraan garoonka diyaaradaha, magaaladaasi ayaana ah midda labaad ee ugu wayn dalka Ciraaq.
Waxaa walaac laga muujiyay ammaanka kumannaan shacab ah oo ku go’doonsan halkaas.
Weerarkan waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay Axaddii Ra’iisalwasaaraha Ciraaaq Xaydar Al-Cabadi
Abdulamir Yarallah oo ka mid ah saraakiisha milatariga oo war qoraal ah soosay ayaa sheegay in ciidammada gurmadka degdega ah ay qabsadeen tuulooyinka Athbah iyo Al-Lazzagah kuwaas oo ah labo tuulo oo ku yaalla koonfurta garoonka diyaaradaha ee Mosul.
Ciidammada dawladda ayaa dib u qabsaday bariga magaalada bishii hore,
waana meesha kali ah ee ay ku xoogbadan tahay kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka. laakiin milatarigu waxay sheegeen in laga yaabo in ay
dhibaato kala kulmaan dhanka galbeedka.
Laakiin hadda wax horumar ah lagama sii samaynin bariga Mosul maadaama oo la jaray dhamaan buundooyinkii ka talaabi lahaa webiga Tigris oo isku xirayay galbeedka iyo magaalada inteeda kale. Hargaysa Feebaraayo 20, 2017 Wasiiru Dowlaha Arimaha Gudaha ee Maamulka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in maxkamad la gayn doono Wariye Cabdimaalik Coldaan oo ah wariye si wayn looga yaqaano dalka Soomaliya.
Dhinaca kale wararka naga soo gaadhay Magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in safiirka Ingriiska u fadhiya UK ee dagan xalane ayaa si toos ulla hadlay maamulka Soomaliland isaga ku amar in la siiyo daayo wariyahaas.Muqdisho Feebaraayo 20, 2017 Madaxweynaha Soomaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in dagaalyahanada Xarakada Al-shabaaboo dowladda dagaal kula jira ay dileen sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2016-kii in ka badan 900 oo shacab ahaa.
“Sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2016-kii Al-shabaab weerarada ay fuliyeen waxaa ku dhintay 900 oo qof oo shacab ahaa, dadka sida macna darada loo dilay waxba ma galabsanin, waxa ay ahaayeen dad masaakiin ah goobihii ay ku sugnaayeen ayaa loogu tagay oo lagu dilay, ka dowlad ahaan waan ka xunahay, jawaabta dowladda cusub laga rabo waa in ay soo afjartaa dagaalka Al-shabaab”, ayuu yiri Madaxweyne.Muqdisho Feebaraayo 20, 2017 Iyadoo Cabasho xoogan ay ka taagneed Khidmadda Canshuuraha laga qaado
Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxaa arrintaas Xayiraad ku soo rogay Hanti Dhawrka Guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale.
Ganacsatada ayaa cabasho xoogan ka muujinayay Khidmadda qaadisteeda ay Masuulka ka tahay Rugta Ganacsiga iyo shaqsiyaad si iskood ah Ganacsatada uga Aruuriya Lacago ay ku sheegeen Canshuuraad.
Hanti dhowrka ayaa soo saartay Wareegto uu ku faah faahinayo Canshuuraadka la xannibay.WARARKA MAANTA Feebaraayo 19, 2017Su'aasha Maanta: Madaxweyne Mudane Farmaajo, ma ogtahay ragga aad xilalka u magacaawdo inay jaajuusiin daba-dhilif ah u yihiin Ethiopia inta aan ka ahayn Denjire Axmed Fiqi? Ma waxaad isleedahay Ummadda Soomaaliyeed ma oga ragga daba-dhilifka u soo ahaan jiray Ethiopia iyo dowladdaha lugooyadda ku soo hayey Ummadda Soomaaliyeed? Mise waxaad rabtaa inay Dowladda Wada Dadban si deg deg ah ugu fashilanto hoggaanka dalka? Sida ugu deg degta badan u soo magacaaw Raysal Wasaare Ummadda Soomaaliyeed ka xoreeya Ethiopia iyo dowladdaha shisheeyaha ah ee Soomaaliya sii raba inay baa'biyeen!Muqdisho Feebaraayo 19, 2017 Qarax weyn oo ka dhacay degmadda Wadajir ayaa waxaa la sheegayaa inuu gaystay khasaaro farbadan taasoo ay weli baarayaan laaamaha amniga dalka.Muqdisho Feebaraayo 19, 2017 Xilli dhawaan la filayo in Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu Caleemo saaro Magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in Safar Dalka Dibaddiis ah uu ugu Ambabixi doono.
Madaxweynaha ayaa lagu soo warramayaa in Caleemo saarkiisa kadib safarkiisii ug u horreeyay uu soo Cumreysan doono kadib markii uu u ambabaxo Boqortooyada Sacuud Arabia.
Waa Safar ka duwan Safarradii looga bartay Madaxdii ka horreysay ee Soomaaliya maadaama markii la doorto ay u ambabixi jireen dalalka Dariska la ah Soomaaliya.
Inta uu ku guda jiro gudashada Cumrada ayaa Madaxweynaha la filayaa In uu u soo duceeyo umadda SoomaaliyeedGalmudug Feebaraayo 19, 2017Dib u dhac ayaa ku yimid Doorasho Madaxweyne oo maanta ka dhici laheyd Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee maamulka Galmudug.
Xildhibaano ka tirsan Galmudug ayaa horay u sheegay in 19 bishaan oo maanta ku beegan ay dooran doonaan Madaxweyne , balse wararka ayaa waxaa
ay sheegayaan in doorashadii Madaxweynaha Galmudug ay dib u dhacday.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Galmudug oo aan xiriir la sameynay
ayaa inoo sheegay in maanta aysan jirin doonin doorasho ka dhaceysa Cadaado.
Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Gulleed ayaan wali Aqbalin xilka qaadis ay ku sameeyeen xildhibaanada Galmudug.Kenya Feebaraayo 19, 2017 Ciidamada Booliska dalka Kenya ayaa Magaalada Mombasa ku xiray labo qof oo si weyn ay u baadigoobayeen , islamarkaana la aaminsan yahay in ay xiriir toos ah ay la leeyihiin Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxda Daacish.
Labada qof ee ay xireen Ciidamada Booliska ayaa la sheegay in ay u safreen dalka Syria oo ay dib uga soo laabteen , islamarkaana ay ka soo qeyb qaateen dagaallo ka dhacay dalkaasi sida ay sheegeen Saraakiisha ammaanka dalka Kenya.
Labada qof mid ka mid ah ayaa ah Haweenay waxaana lagu magacaabaa Nasra Hyder Faiza, waxaana la sheegay in ay dhalatay 1991 dii, islamarkaana ay ka soo qeyb qaadatay weeraro argagixiso oo ka dhacay dalka Kenya.
Salim Mohamed Rashid oo dhashay 1996 ayaa sidoo kale la sheegay in uu
u safray dalka Syria oo uu ka soo bar bar dagaalamay Kooxda Daacish.
Dowladda Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in ay suurtagal tahay in wiilkaan iyo Gabadhaan sidoo kale doonayeen in ay tashkiiliyaan dhalinyarada doonaysa in ay ku biiraan Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacish.
Kenya ayaa sheegtay inay baaritaan dheeri ah ku sameynayso dadkaan ay
ciidamada ammaanka ka qabteen magaalada Mombasa ee Gobolka Xeebta dalka
KenyaGalmudug Feebaraayo 19, 2017 Ciidamada Nabadsugida Galmudug iyo ciidamo Mareykan ah ayaa sheegay in ay Saldhig ciidan ka sameysanaayaan xeebaha gobolka Mudug si loola dagaallamo Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidanka Nabad Suggida Galmudug Saadaq Cumar Xasan oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in dhawaan Saldhigaasi laga dhisi doono xeebaha gobolka Mudug gaar ahaan degmada Hobyo iyo degaanka Wisil.
Ujeedka ayuu sheegay in uu yahay in lala dagaallo Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxaha Burcadbadeeda Soomaaliya.
Ciidamada Galmudug ayaa doonaya in ay Al-Shabaab ka saaraan degmada Xarardheere , waxaana ay rabaan in ay sameystaan saldhigyo ay kasoo weeraraan degmadaasi.Qoryooleey Feebaraayo 19, 2017Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM ayaa tiro Madaafiic ah waxa ay ku garaaceen Duleedka Degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Meelaha ay AMISOM-tu duqeysay waxaa ka mid ah deegaanka Farxaane oo qiyaastii 7 Km xagga Koofur Galbeed uga beegan degmada Qoryooleey.
Deegaankaasi Farxaane ee Ciidamada AMISOM ay Madaafiicdu la beegsadeen ayaa waxaa gacanta ku haya dagaalyahanada Al Shabaab.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in Madaafiicdaasi ay tiradoodu illaa 20 kor u dhaafeysay islamarkaana ay ka dhasheen khasaarooyin walow aan illaa iyo iminka la cayimi Karin.WARARKA MAANTA Feebaraayo 18, 2017Su'aasha Maanta: Mudane Madaxweyne Farmaajo, Maxay Ummadda Soomaaliyeed u taageersan tahay 92.6% in aad Raysal Wasaare u magacaawdo Xildhibaan Axamed Macallin Fiqi oo horay u soo noqday Safiir iyo Taliyihii Hay'adda Nabad-Sugidda Qaranka Soomaaliyeed oo uu hawl hufan iyo hawl-karnimo ku hoggaaminayey? Fadlan Ummadda Soomaaliyeed ayaa ku qasabtay inay labada gole ku doortaan haddaba waa in aad ogaataa inay inay Ummadda Soomaaliyeed 92.6% in aad Raysal Wasaare u magacaawdo Xildhibaan Axamed Macallin Fiqi waa haddii aad rabto dowlad dadka iyo dalka u daacad ah oo ay la wada-shaqayn doonaa Ummadda Soomaaliyeed gudaha dalka iyo dibaddaba. Muqdisho Feebaraayo 18, 2017Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed ayaa lagu wadaa in uu soo magacaabo Ra’iisulwasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Cabdinaasir Cabdulle Maxamed ayaa ah nin ku cusub siyaasadda , islamarkaana u tartamayay xilka Madaxtinimada Soomaaliya.Muqdisho Feebaraayo 18, 2017 Madaxweynaha cusub ee dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa la sheegay in uu amar ku bixiyay in mushaaraadka la siiyo ciidanka dowlada Soomaaliya oo mudo 8-bilood ah qaarkood wax mushara ah la siin.
Ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa shalay la siiyay mushaarkii ugu horeeyay ay helaan mudo 8-bilood , waxaana mushaarkan la siiyay ciidanka
booliiska uu yahay hal bil kaliya, waxaana wali ka maqan ciidanka mushaar iyo xaquuqo kale ay lahaayeen.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo ayaa balan qaadyadii uu sameeyay waxaa ku jiray in xooga uu saarayo bixinta mushaaraadka ciidanka qalabka sida iyo sidii loo dhisi lahaa ciidanka Xooga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan amaanka guud ee dalka.Muqdisho Feebaraayo 18, 2017 Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare ee Dalka Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf ayaa ka hadlay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu doortay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweynaha Cusub ee la doortay ayuu sheegay in looga baahanyahay inuu dalka kusoo dabaalo sharci uuna soo celiyo dadkii uu sheegay in sida sharci darada ah xilka looga qaaday oo isagu uu ka mid yahay isagoo
tusaale usoo qaatay In qodobada xil ka qaadistiisa loo cuskaday qaarkood ay awood siinayeen isaga.
Caydiid Ilka Xanaf oo sii hadlaya ayaa waxaa uu kula taliyey Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Baarlamanka Soomaaliyaba in looga baahanyahay inay hagaajiyaan Garsoonka,Caddaaladda iyo Dastuurka dalka,Si gaara Madaxweynaha ayuu ugu
baaqay in laga doonayo inuu dhiso guddi dhameystira dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya uuna madaxweynuhu sameeyo sharci iyo Garsoor Caddaalad ku dhisan.
Caydiid Ilka Xanaf ayaa muddo soo ahaa guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya waxaana dhawr mar oo ay is qabsadeen madaxweynihii waqtigaa ee Xasan Sheekh ugu dambeyntiina waxaa uu ku dhawaaqay inuu is-casilay,marka la eego qof ahaanna waa nin wax badan ka yaqaanna arimaha garsoorka,Caddaaladda iyo sharciyada dowliga ah.Shabeele Feebaraayo 18, 2017 Ciidamo la sheegay in ay ka tirsan yihiin Milatariga Soomaaliya ayaa Gobolka Shabellaha Hoose gaar ahaan inta u dhaxeysa Walanweyn iyo Tixsiile waxaa ay ku Kufsadeen Dumar saarnaa Gaari nuuca Caanaha qaada ah islamarkaana ka baxay Magaalada Muqdisho.
Waxaana uu codsadey in arintaan ay soo faragaliyaan Madaxda Dolwada Somalia oo la sheegay in wax loogu dhimayo Sumcada ciidanka.Jowhar Feebaraayo 18, 2017 Maamulka Gobolka Sh/Dhexe iyo Kan degmada Jowhar ayaa waxa ay koormeer ku tageen Dekedihii hore ee qadiimiga ahayd ee Degmada Cadalle ee gobolka Sh/Dhexe.
Guddoomiyaha Gobolka Sh/Dhexe Axmed Meyre Makaraan ” Axmed Faal” ayaa
Warbaahinta u sharaxay sida ay bulshada gobolka Sh/Dhexe ugu baahan yihiin Dekedaan.
waxa uu sidoo kale sheegay in Maamulka hirshabeelle ay isla garteen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo furo Dekeda.Banjul GabiaFeebaraayo 18, 2017 Madaxweynaha cusub ee Gambia, Adama Barrow, ayaa si rasmi ah loogu caleemo saari doonaa caasimadda Banjul, halkaas oo ay ka dhici doonaan dabaal degyada lagu xusayo 52 guuradii madaxbannaanida dalka.
Kumanaan qof ayaa la filayaa in ay ka qayb galaan xafladda caleemo saarka oo ka dhicci doonta garoonka weyne ee kubbada cagta ee ku yaal caasimadda.Muqdisho State Feebaraayo 17, 2017Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta kulan gaar ah waxa uu la qaatay Danjiraha dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Mudane Stephen Schwartz.
Danjire Schwartz ayaa ugu hambalyeeyay Madaxweyne Farmaajo guushii uu
ka gaaray doorashadii 8da Febraayo, waxa uuna sheegay in dowladdiisu diyaar u tahay in ay garab is taagto ayna taageerto dowlada cusub.
WARARKA MAANTA Feebaraayo 17, 2016Su'aasha Maanta: Maxuu Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo u magacaawi layahay Raysal Wasaaraha cusub? Boqolkiiba 89.8% Ummadda Soomaaliyeed waxay taagersan yihiin inuu Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo u magacaabo Taliyihii hore ee Nabadsugidda Denjire Axmed Macallin Fiqi inuu noqdo Raysal Wasaara cusub waa haddii uu Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo rabo wada shaqaynta Ummadda Soomaaliyeed si ay uga xoroowdo shisheeyaha qaska iyo fowdada ku soo hayey Ummadda Soomaaliyeed. South West State Feebaraayo 17, 2017 Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa xilkii ka qaaday wasiir ka mida Golihiisa Wasiirada.
Mooshinka lagu doonayo in xilka looga qaado Shariif Xasan ayuu wasiirka xilka laga qaaday dhowaan sheegay inay xildhibaanada saxiixay gaarayaan 97, isla markaana ay dhowaan u yeeri doonaan Shariifka.Nairobi State Feebaraayo 17, 2017 Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo shir jaraaid ku qabtay Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ayaa waxa uu ka hadlay xil wareejintii Madaxweynaha ee shalay ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya, kadib markii Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka ku wareejiyay Madaxweynaha cusub Farmaajo.
Waxa uu sheegay wax lagu farxo in ay aheyd in guul iyo si nabad ah ay
ku soo dhamaato Doorashadii Soomaaliya, isagoo sidoo kale sheegay xil wareejintii shalay cadeyn in ay u tahay Soomaaliya oo ku taalla Geeska Afrika in ay ku soo laabatay wadadii saxda aheyd.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay Doorashadii Soomaaliya ka dhacday in ay rajo wanaagsan u aheyd dadka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka, maadaama ay ku dhacday si nidaam ah oo aysan jirin arbushaad iyo waxyaabo kaleMuqdisho State Feebaraayo 17, 2017 Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya Mukhtaar Xuseen Afrax
ayaa waxa uu sheegay dalka in ay ka dhacday Doorasho, si nabad gelyo ahna ay ku soo dhamaatay, waxa uu uga digay Booliska in ay ku mashquulaan waxyaabo aanan shaqadooda aheyn.
Sidoo kale Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa sheegay Booliska in laga doonayo in uu ka warqabo xaalada uu dalka ku sugan yahay, maadaama nabad
gelyada guud ee dalka uu xil ka saaran yahay, loona baahan yahay in mar
walba ay ka shaqeeyaan.
Doorashadii Soomaaliya ka dhacday waxaa si weyn ugu lifaaqnaa Ciidanka Dowladda Federaalka, gaar ahaan kuwa Booliska, maadaama dhowr jeer oo hore lagu eedeynayay in ay gafeen shaqadooda oo ay ku dhex milmeen Doorashada.Khaatumo State Feebaraayo 17, 2017 Madaxweynaha maamulka Khatumo Cali Khaliif Galeyr oo dhawaan dalka jabuuti hehsiis kula soo galay maamulka soomaaliland ayaa waxa uu ugu danbeyn shaley dib ugu soo laabtay gobolka sool.
Warar hoose oo ay heleyso idaacadda Simba ayaa ku waramaya in cali khaliif loo diidan yahay in uu tago deeganada khaatumo arintaana waxaa ka sahqeynaya wasiiro ka tirsan maamulka khaatumo oo laga qadiyay heshiiski jabuuti.Puntland State Feebaraayo 17, 2017 Xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan Aw-cusmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay dhowaanahan Degaanada Maamulka Puntland uu ka aramiyo in ay ku bateen Tacadiyada kufsiga la xiriira.
Dhanka kale Xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan Aw-cusmaan ayaa carabka mariyay falal dambiyeedyadii ka dhacay Degaanada
Puntland, sida falalkii shilalka ahaa ee ka dhacay Puntland.Baydhabo Feebaraayo 17, 2017 Wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka Koonfur Kalbeed Macalin Axmed Maxamed ayaa ka horyimid xil ka qaadis madaxwayanaha maamulkaasi uu kusameyay.
Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha K/galbeed ayaa wareegto uu soo saaray xilkii kaga qaadey Macalin Axmed Maxamed oo ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee maamulkaasi.WARARKA MAANTA Feebaraayo 16, 2016
Su'aasha Maanta: Ma waxaan soo
dhawaynaa Dowladda Wada Dadban? Mise Doorasho dadban oo dhalisay laba
gole oo dadban kuwaasoo dhalay madaxweyne dadban Mudane Maxamed
Cabdillaahi Farmaajo? Haddaba ku soo dhawaada hee “Dowladda Wada
Muqdisho Feebaraayo 16, 2017 Magaalada
Muqdisho gaar ahaan Madaxtooyada Soomaaliya waxaa maanta ka dhaceysa
Munaasabada xil wareejinta Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynhii Soomaaliya Afartii sano ee la dhaafay Xasan Sheekh
Maxamuud ayaa xilka ku wareejin doona Madaxweynaha cusub ee
Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) oo Arbacaii ina
dhaaftay lagu doortay Magaalada Muqdisho.
Munaasabada xil wareejinta ayaa waxaa ka qeyb geli doona
Guddoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) qaar ka
tirsan xubnaha Labada Gole ee Dowladda Federaalka, xubno ka socda
Beesha Caalamka iyo marti sharaf kale.Agaasimaha Warfaafinta
Madaxtooyada Soomaaliya Shadoor Xaaji ayaa warbaahinta u xaqiijiyay
in xil wareejinta ay bilaaban doonto 09:00 subaxnimo, si weyna loogu
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajiyo
iyo Madaxweynihii hore ee dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo
shalay kulmay ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda dalka uu ku sugan
yahay, muhiimadda Dowladda cusub, fursadaha hor yaalla xiligaan iyo
xil wareejinta maanta dhaceysa.
22-ka Bishan oo ku beegan Arbacada soo socota ayaa waxaa dhici
doonta Munaasabada Caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya,
taasi oo ay ka soo qeyb gali doonaan Madax ka socota dalalka Afrika
Muqdisho Feebaraayo 16, 2017
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane
Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmajo) oo maalmahan kulamo la lahaa
Safiirrada dalalka shisheeye ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho
ayaa maanta qaabilay Safiirka Sweden Mudane Mikael Lindvall, waxa
ayna ka wada hadleen sidii dowladda Sweden ay uga qeyb qaadan lahayd
abaaraha ku dhuftay guud ahaan dalka Soomaaliya, amniga, maalgashiga
iyo adkeynta xiriirka labada dal.
Madaxweynaha ayaa yiri “Waxaa jira ku dhawaad 3
milyan oo ruux oo ay abaaruhu saameeyeen. Waxaan u baahannahay
waxqabad degdeg ah maadaama aysan dadka haatan sugi karin ballan
qaadyo fulintooda ay waqti dheer qaadan karto. Waxaan dowladaha
saaxiibka ah oo ay Sweden ugu horreyso ka codsanayaa in ay kaalmo
degdeg ah lasoo gaaraan dadka ay abaaruhu saameeyeen.”
Danjire Lindvall ayaa madaxweynaha ugu hambalyeeyay
guushii doorashada isaga oo sheegay in ay dowladdiisu diyaar u tahay
in ay kaalin mug leh ka qaadato gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waxyaabaha kale ee ay ka wada hadleen ayaa waxaa kamid ahaa tayeynta
laamaha amniga, maalgashiga ay dowladda Sweden ku sameyso kaabayaasha
dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka labada dal.
Gebogabadii kulanka, Madaxweyne Farmaajo ayaa uga
mahadceliyay safiirka Sweden taageerada ay dowladdiisu ka geystay soo
dhaweynta qaxootiga Soomaaliyeed iyo sida uu dalkaasi mar walba u
garab taaganyahay hagaajinta dowladnimada Soomaaliya.
Muqdisho Feebaraayo 16, 2017 Madaxweynaha
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi
Farmaajo ayaa khadka telefoonka kula hadlay Boqorka Sucuudi Carabiya
Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis Aala Sucuud, waxaana boqorka uu ugu
hambalyeeyay guushii uu ka gaaray doorashadii dhacday 8dii bishan.
Madaxweyne Farmaajo iyo Boqor Salmaan ayaa ka wada hadlay
iskaashiga dowladaha Soomaaliya iyo Boqortooyada Sucuudiga, waxa uuna
ka codsaday in la xoojiyo xiriirka labada dowladood ee walaalaha ah.
Madaxweynaha ayaa boqorka uga warbixiyay xaaladda abaaraha dalka
ka jira iyo in Boqortooyada Sucuudiga ay ka qeyb qaadato sidii loogu
gurman lahaa shacabka Soomaaliyeed ee haatan ku nool duruufo aad u
Boqor Salmaan Bin Cabdicasiis ayaa soo dhaweeyay codsiga
Madaxweynaha, waxa uuna sheegay in ay xukuumaddiisa ka qeyb qaadan
doonto hawlaha loogu gurmayo dadka iyo xoolaha ku baaba’ayo
abaaraha xun ee ka jira guud ahaan gayiga Soomaaliyeed.Dhammaad
Garoowe Feebaraayo 16, 2017 C/raxmaan
Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole) oo horey u soo noqday Madaxweyihii
hore ee Maamulka Puntland, kana mid ah Baarlamaanka Soomaaliya oo
shalay dib ugu laabtay Magaalada Garowe ayaa Madaxda Madasha ugu
baaqay in aanay ku mashquulin Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Waxa uu sheegay Faroole muhiim in ay tahay in fursad la siiyo
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo),
si uu u soo xusho Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu sheegay sababta uu uga tagay Magaalada Muqdisho
in ay tahay dad culeys ku haya awgeed, in aanay u isticmaalin in uu
fara-geliyo cida uu soo magacaabayo Madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaan C/raxmaan Faroole ayaa shacbiga Soomaaliyeed ugu baaqay
in ay taageeraan Madaxweynaha cusub, iyadoo aanu buurnayn dhaqaalaha
ay haysato Dowladda Federaalka.
Ugu dambeyntii C/raxmaan Faroole, ayaa Madaxda Maamul Goboleedyada
ugu baaqay in ay u adeegaan bulshadooda ay Abaaruhu halakeeyeen, oo
aanay ku mashquulin shaqada Madaxweyne Farmaajo.
Muqdisho Feebaraayo 16, 2017 Madaxweynihii
hore ee DFS, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu maanta Xilka
ku wareejiyo Madaxweynaha cusub, Maxamed C/llaahi Farmaajo, iyadoo
Munaasabadaasi ka dhici doonto Xarunta Madaxtooyadda ee Villa
Xil-wareejinta kadib, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mas’uuliyiinta
kale ee isaga la shaqeynaysay waxay faarujin doonaan Villa Somalia,
si ay taasi ugu gogol-xaarto in Madaxweyne Farmaajo si rasmi ah uga
hawl bilaabo Villa Somalia.
Ilo-wareed lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey in Xasan Sheekh
Maxamuud qorsheynayo inuu safar ugu ambabaxo dalka Tanzania ama
Turkiga, si uu muddo 6 bilood ugu soo nasto.
Waxa uu la midoobi doonaan Qoyskiisa oo iyagu ku kala nool Turkiga
Madixii ugu sarreeyey Xafiiska Madaxtooyadda ee Villa Somalia ayaa
isagana ku wajahan Maraykanka, halka Ku-xigeenkiisa la sheegay inuu
doonayo inuu dib ugu laabto Hay’adda Barnaamijka Cuntada Adduunka
“WFP” oo uu horey uga shaqeynayey in ka badan 10-sanno.
Madixii Hab-maamuuska ee Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isagana la
sheegay inuu dib u degi doono dal ku yaalla Europe.
Madixii Warfaafinta ee Madaxtooyadda ayaa isagana la sheegay inuu
ku wajahan yahay dalka Koonfur Afrika.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Xilka Wareejinayo Xasan Sheekh Maxamuud
ayaa la filayaa inuu 6 bilood kadib ku soo laabto dalka, maadaama uu
yahay Xildhibaan tan iyo inta uu nool yahay, sida ku cad Qoddobka
64-aad, farqadiisa 4-aad ee Dastuurka KMG ee Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, dhamaan Madaxweynihii iyo
Ra’isul-wasaarayaashii dalka soo maray waxay intooda badan ku
noolaadaan Dibedda marka uu Xilli-hawleedkoodu dhamaado.
Madaxweynihii ugu horreeyey Somalia, Allaha U Naxariistee Aadan
C/lle Cusmaan “Aadan Cadde” ayaana ahaa Madaxweynaha keliya ee
markii uu xilka ka degay aan marnaba ka dhoofin dalka hooyo.
Qoryooleey Feebaraayo 16, 2017 Ciidamada
amisom ee ku sugan gobolka sahbeelaha hoose ayaa lagu soo waramayaa
in degmada qoryooley ay ku toogteen nin shacab aha.
Ciidamada ayaa la sheegay in ninkaani ay si
bareer ah risaas ugu fureen waxana a sheegay ninkaan kamidka
aha dadka shacabka ee degmada qoryooley in ciidamada ay ka shakiyeen.
Ciidamada amisom ayaa marar badan dilal bareer ah ka geystay
gobolka shabeelaha hoose.
Maamulka degmada QOryooley ayaa sheegay in ay baaritaan ku aadan
arintaan ay smaeynayaan.
Muqdisho Feebaraayo 16, 2017 Ciidanka
amaanka degmada wadajir ee gobolka banadir oo howlgalo ka sameyay
xaley ila iyo sakaay aroorti xaafado katirsan degmada wadajir ayaa
howlgaladaasi waxa ay ku sop qabqabteen dad badan oo lagu tuhunsan
yahay in ay ka dambeyeen dil loogu geystay Nin Nabadoon ahaa Suuqa
Weyn ee Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
Allahu Naxariistee Nabadoon Muuse Ilka-weyne
oo kamid ahaa Nabadoonada Soomaliyeed xili uu kasoo baxay
Salaadii Maqrib sida idaacadda Simba ay u sheegeen dad ka agdhawaa
goobta nabadonka lagu dilay kooxaha dilka u geystay Nabadoon Muse oo
Ku Dhuftay dhowr xabadood ayaa goobta ka baxasaday inkasto daqiiqado
kadib ay goobta soogaareen cidamo katirsan maamulka degmada wadajir
waxaana howlagalo baritaano ah ay ka sameeyeen goobta dilaka uu ka
Maamulka degmada wadajir ayaa xaqijiyay in gacanta ay ku so
dhigeen ilaa iyo hadda shan ruux oo mamulku u tilmamay in ay ku
eedeysan yihiin dilka Nabadoonka.
WARARKA MAANTA Feebaraaayo 14, 2017 Muqdisho Feebaraayo 15, 2017 1- In afarta sano ee soo socota uu u shaqeeynayo
Shacabka Soomaaliyeed balse aanu ka shaqaysanaynin.
3- In uu isku xirayo shacabka iyo dawladda si loo helo dawladnimo
taam ah.4- In uu dhisayo islamarkaana maalgalinayo Hay’adaha
cadaalada iyo kuwa amaanka.5- In la sameeyo hab loo heli karo
kalsooni ay dadku dawladooda ku gacansiin karaan si loo tuso caalamka
in dawlad shacabku dhistay ay ka hanaqaaday Soomaaliya.6- In
awooda dawladu gaarto dhamaan gobolada dalka Soomaaliya oo la arko
canshuuraha badda iyo barriga oo si isku mid ah ugu soo xaroonaya
khasnadda ama banka dhexe ee dawladda Soomaaliya.
Waxaa uu talo waydiistay shacabka Soomaaliyeed isagoo
ka codsaday in xumaanta iyo dacaayadaha aan wanaagsanayn ku badaleen
talo wax dhismo oo dalka Soomaaliya ka badbaadin karto dib u dhac
kale.Wixii talo ah dheeri ah halkaan ku soo gudbiya adinka oo
qaadanaya talada Madaxwaynaha. North Korea Feebaraayo 15,
2017Kim Jong-Nam wuxuu inta badan noloshiisa ku qaatay
dibadda Kuuriyada WaqooyiLahaanshahaKim Jong-Nam wuxuu inta badan
noloshiisa ku qaatay dibadda Kuuriyada WaqooyiNin ay walaalo
yihiin hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa la rumaysan
yahay in uu ku dhintay Malaysia.
Ilo wareedyo Ingiriis ah oo ku dhow qoyska Kim Jong Nam ayaa BBC u
sheegay in sun loo adeegsaday.
Mid ka mid ah warbaahinta Kuuriyada koofureed ayaa sheegtay in
ninkaas ay laba dumar ah oo isticmaalay cirbado sumaysan ku dileen
garoonka dayaaradaha ee Kuala Lumpur.Meydkiisa ayaa la rumaysan
yahay in baaritaan lagu samayn doono.
Kim Jong Nam ayaa ahaa wiilka ugu weyn carruurta hogaamiyihii hore
ee Kuuriyada waqooyi Kim Jong
Hanti Dhowraha Qaranka oo shir jaraa’id
ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaamay
heshiiska ay Imaaraadka maamulka Somaliland kula galeen saldhigga
Militari ee Berbera. https://www.youtube.com/watch?v=4PizWgrejjE
WARARKA MAANTA Feebaraaayo 13, 2017 Somali Cyber Teams warms #Somalia's recently #elected #President H.E. Mohamed Abdillahi Farmajo not to #choose wrong Somali #Prime Minister.Su'aasha Maanta: Mudane Madaxweyne Farmaajo, yaa mudan in aad u magacawdo Raysal Wasaare? Jawaabta Shacabka waa: waxaa mudan in aad Raysal Wasaare u magacawdo shaqsiyaadkan mid kamid ah: 1. Denjire Axmed Macallin Fiqi (Taliyihii hore ee Nabadsugidda), 2. Denjire Maxamed Cali Ameriko, 3. Mudane Cabdiraxmaan Caynte (Wasiirka Qorshaynta), ama Wasiirkii Hore ee Waxbarashadda Dr. Nuur oo horay la soo shaqeeyey Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xilligii uu ahaa Raysal Wasaare. Muqdisho Feebaraayo 13, 2017 Maalinta raadiyowga ee caalamka ayaa ku beegan maanta, maanta oo ay taariikhdu tahay 13ka Febraayo.
oo kale sanad walba ayaa waxaa la xusaa ahmiyada raadiyaha uu ku leeyahay baahinta wararka iyo xogta muhiimka ah caalamka. Si
kastaba ha ahaatee dhawaan ayaa waxaa soo batay dadka aanan dhageysan aalaaba idaacadaha balse wararka ka aqrista baraha internetka. Internetka ayaa yareynaya dadkii dhageysan jiray idaacadaha tiradooda.
kastaba ha ahaatee, idaacadaha ayaa dhageysigoodu wali ahmiyad ay leedahay gaar ahaan markii aadan rabin inaad war aqriso balse aad dooneyso adoo dhan u jiifa indhahana ay kuu daboolan yihiin inaad wararka lasocoto!
Soomaalida ayaa wali aad u jecel dhagaysiga raadiyeyaasha. Gudaha Soomaaliya iminka waxaa ku yaala idaacado badan.
Caasimada Muqdisho oo qura waxaa ku yaalada tobanaan idaacadood.Muqdisho Feebaraayo 13, 2017 Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi maxamed ayaa kulan la qaatay Madaxda Ruggta Ganacsiga Soomaaliyeed , waxaana uu kala hadlay sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen gurmadka loo sameynayo dadka ay
Agaasimaha Ruggta Ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka ay la qaateen Madaxweynaha , waxaana uu sheegay in ay u muujiyeen in ay taageersan yihiin , ganacsatada Soomaaliyeed ay ka qeyb qaadan doonaan doorkooda ugu aadan gargaarka abaaraha.Muqdisho Feebaraayo 13, 2017 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa la kulmay safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Carlo Campalina.
Madaxweynaha J.F.S Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa dhambaal
ka guddoomay safiirka dowladda Talyaaniga Ambassador Carlo Campalina, kaas oo uu ka siday Ra’iisul wasaaraha dalkaasi, madaxweynaha iyo safiirka ayaa iska wareystay xiriirka labada dal oo ah mid taariikhi ah oo muddo dheer soo jiray.
“dowladda Talyaaniga waan uga mahadcelinayaa sida ay u garab taagan tahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, waxaan hubaa inaana ilaawi doonin kaalinta mugga leh ee aad ka qaadataan dib u dhiska dalkaan, sidoo kale waxaa uga mahadcelinayaa madaxweynaha Talyaaniga Hambalyada
uu ii soo diray” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.Muqdisho Feebaraayo 13, 2017 Wargeyska The Financial Times ee ka soo baxa dalka Britain ayaa Warbixin dheer ka qoray Shaqo maalmeedka soo wajahi karta Madaxweynaha DFS, Maxamed C/llaahi Farmnaajo tahay caqabado ballaaran, oo ay ka mid yihiin Musuqa Maaliyadda, Maqnaanshaha Ammaanka, Awood La’aanta Dowladda
Dhexe, Ciiddanka iyo Abaaraha.
Warbixinta ayaa lagu muujiyey in mid ka mid ah Diplomaasiyiinta sheegay mar wax laga weydiiyey arrimaha Ciiddanka Somalia waxa uu yiri:-
“Anigu marnaba ma arkin maalgelin heerkaasi ah oo aan lahayn Natiijo la
Wargeyska waxa kale oo qoray in Awood La’aanta Dowladda Dhexe keentay
inaysan ka hawl-gelin qeybo badan oo ka mid ah dalka, iyadoo Goballaddii ugu waa weynaa ee dalka, sida Somaliland ku dhawaaqeen inay ka go’een Dowadda Dhexe sannadkii 1991-kii,
Dowladda waxaa kaloo hor yaalla iyadoo uusan jirin Nidaamka Garsoorka
ama Nidaamka Canshuurta Caadiga ah, waxayna marnaanshahaasi u oggolaatay inay Hay’addaha Gaarka ka hawl-galaan.
Taasi ayaa keentay inay Dowladda lahayn wax Maaliyad oo dib loogu laaban karo, iyadoo daynta sannadkiiba gaarto 5 Billion oo Dollar, Kharajka Adeegga Garoonka Diyaaradaha ka soo xerooda oo keliya ayaa lagu
Diplomaasiyiinta waxay Madaxweyne Farmaajo uga digeen haddii uusan xaqiijinin tallaabo rasmi ah inuu si degdeg ah u lumin doono Deeq-bixiyayaasha.Muqdisho Feebaraayo 12, 2017 Ugu yaraan labo ruux ayaa ku dhimatay, labo kalena wey ku dhaawacmeen
qaraxyo caawa ka dhacay xaafadda KPP oo ka tirsan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Qaraxyadan oo gaarayey illaa labo ayaa waxaa loo adeegsaday bambooyinka gacanta laga tuuro, kuwaasoo lagu weeraray ciidamo ka tirsan
booliska Somalia oo ku sugnaa agagaarka isgoyska KPP.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in labada ruux ee geeriyootay ay ahaayeen shacab goobta ka dhowaa, halka labada dhaawaca ahna la sheegay inuu ku jiray askari ka tirsanaa ciidamadii qaraxyadaas lala beegsanayey.
Ciidamada Booliska saldhiga Hodan oo halkaas ku dhow ayaa ku soo baxay qaraxyadan iyagoo halkaas ka sameeyey howlgalo ay ku xoojinayaan amaanka.
Weerarada noocan ah ee isugu jira qaraxyada iyo dilalka ayaa had iyo jeer ku soo laalaabta magaalada Muqdisho iyo goobaha kale ee ay dowladu ka taliso, kuwaasoo marna xoogeysta marna hoos u dhaca.Muqdisho Feebaraayo 12, 2017 Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Mecheil Kiting ayaa sheegay in shaqooyinka ugu horreeyo ee dowladda Cusub ee Somaaliya laga rabo ka mid tahay wax ka qabashada Abaaraha baahsan ee ka jira dalka Soomaaliya.
Mechiel Kiting ayaa sheegay in arrintani loo baahan yahay in ay iska garabsadaan Qaramada Midoobay iyo Sidoo kale Maamul Goboleedyada dalka si Dowladda Dhexe ay xal ugu hesho samata bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Sidoo kale Mr Kiting ayaa carabka ku dhuftay haddii xaaladaha Abaaraha ay sii jiraan ay dalka u bedeli doonaan Xaalado Macluul ah oo soo wajaha dad badan.
Danjiraha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in uu rumeysan yahay in doorashadii Madaxweyne ee dhawaan ka dhacday Muqdisho ay si xalaal ah u qabsoontay.
Ugu dambeyn Danjire Kiting ayaa cod dheer ku sheegay in doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinka horeMuqdisho Feebaraayo 12, 2017 Wasiirka Wasaarada Gaadiidka iyo Duulista hawada ee Xukuumada Soomaaliya Cali Jaamac Jangeli oo uu wehgeliyo Maxamed khaliif oo ah Mas’uul ka tirsan Wasaaradaasi uu u Ambabaxay maanta Dalka Canada halkaasi oo la filayo inuu ka dhaco kulan looga hadlayo Wareejinta Maamulka Hawada Soomaaliya.
Warar Xog Ogaal ah ayaa sheegaya in Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista hawada ee Xukuumada Soomaaliya ay sheegaya in Maamulka Hawada Soomaaliya ay Daneynayan Madaxda Dowladdaha Kenya, Ethiopia, Djibouti, Mauritius iyo Hindiya.
Waxaa sidoo kale ay Mas’uuliyiintani ayaa Xaqiijiyeen in la qorsheynayo in Wasiirku uu Saxiixo Maamulka Hawada Soomaaliya inay la wareegayaan Dowladahaasi 16-ka bishan oo Wasiirku Wadanka Canada ku Saxiixayo Dikumiintyo Cadeynaya in Dowlada Soomaliya lagala wareegay Maamulkii Hawadeeda.
Mas’uulkan lagu Magacaabo Maxamed khaliif ayaa la sheegay inuu kulamo
kala duwan horay ula yeeshay Dowladaha daneynaya Heshiiska Hawada Soomaaliya inay Saxiixdo Dowlada, isaga oo la rumeysan yahay inuu yahay shaqsiga ku Cadaadinaya Wasiir Jangeli inuu Hawada Soomaaliya u Gacan geliyo Dowqladahaasi Shisheeye.
Markii uu dhaco Saxiixa Wasiirka Wasaarada Gaadiidka iyo Duulista hawada ee Xukuumada Soomaaliya cali jaamac Jangeli uu ku Gacan Gelinayo Maamulka Hawada Soomaaliya ayaa la qorsheeyay in Qalab Muhiim ah oo Yaala Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho la geeyo Dalka Kenya si halkasi looga Maamulo Hawada Soomaaliya.
Qorshan ay damacsan yihiin Wasiir Jangali iyo Maxamed khaliif ayaa la
aaminsan yahay in ay tahay qiyaano Qaran, maadaama aysan waxba kala socon Madaxweynihii hore ee Dalka, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaarihiisa, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Talaabadan ayaa u muuqata mid looga Faa’iideysanayo Wasiirada uu Waqtiga ka idlaaday iyo kala wareega Madaxweynaha Cusub ee Dalka Maxamed
Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxweynihii hore ee Dalka Mudane Xasan SHeekh
MaxamuudMuqdisho Feebaraayo 12, 2017 WARARKA MAANTA Feebaraaayo 08, 2017 Muqdisho Feebaraayo 09, 2017 Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Maxamed Aadan Axmed oo si toos ah uga hadlay TV-ga Qaranka ayaa sheegay in Rasaasta ay Ridayaan Ciidanka Dowladda Federaalka in ay lidi ku tahay amniga Dalka.
Waxa uu ugu baaqay Ciidanka in ay ilaaliyaan guud ahaan amniga Dalka iyo xasiloonida Dalka, si loo gaaro hormar loo wada dhan yahay.
Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Muqdisho xalay waxa ay u aheyd Habeen wanaagsan, maadaama la doortay Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) oo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay taageersan yihiiin.Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Muqdisho xalay waxa ay u aheyd Habeen
wanaagsan, maadaama la doortay Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) oo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay taagersan yihiiin.Maraykanka Feebaraayo 09, 2017Dowlada Mareykanka ayaa u hambalyeysay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) oo xalay si aqlabiyad leh ay Baarlamaanka Soomaaliya ugu doorteen gudaha magaalada Muqdisho.
Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibada Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu si dhaw ula shaqeyn doono Madaxweynaha cusub ee
Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Dowlada Mareykanka ayaa ku dhiirigelisay hoggaanka cusub ee Soomaaliya inuu tallaabo la aamini karo uu u qaado sidii uu uga taqalusi
lahaa musuq-maasuqa iyo sidii uu u sameyn lahaa Hay’ado xoog leh oo ka soo shaqeeya Doorashooyinka soo socda, si loo suurageliyo in Soomaaliya ay ka dhacdo Doorasho hal qof iyo hal cod ah sanadka 2020-ka.
Muqdisho Feebaraayo 09, 2017 Xalay Muqdisho waxaa la riday Rasaas aad u fara badan, taas oo markii
hore ay dad u maleynayeen Dagaal toos ah, balse ay aheyd oo keliya Dabaaldeg, waxaana wadooyinka Muqdisho isugu soo baxay shacab aad u fara
badan, taas oo sababtay in la kala garan waayo Ciidamada iyo dadka rayidka ah.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari)
oo shacabka kala halay Warbaahinta Dowladda ayaa ku baaqay in xaalada la dejiyo si Rasaasta Ciidamada ay ridayaan aysan u geysan waxyeelo, isagoo sidoo kale aad u amaanay Ciidanka Ammaanka, oo ka hortagay in ay dhacdo Arbushaad xilliga Doorashada.
Sidoo kale Guddoomiye Jawaari ayaa Ciidanka ku dhiira geliyay qaabka ay amniga u sugayaan, isagoo sidoo kale ugu baaqay in ay adkeeyaan amniga, wixii hada ka dambeeyana ay nolosha noqon doonto mid caadi ah.Nairobi Feebaraayo 09, 2017 Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa is hortaagtay go’aanka ay dowladda ku dooneysay inay ku xirto xerada qaxootiga ee Dhadhaab, qaxootiga halkaa ku noolna ay dib ugu celiso Soomaaliya.
Maxkmadda sare ayaa go’ankaasi ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn.
Dolwadda ayaa soo saartay amarka xiritaanka xerada Dhadhaab sanadkii la soo dhaafay.Feebaraayo 09, 2017 Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Britain, Boris Johnson ayaa sheegay inay Dowladiisa u hambalyeynayaan Madaxweynaha la-doortay ee Somalia, Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Waxa uu sheegay inay Somalia samaysay Horumar weyn o oay kaga soo kabanayso Dagaalladii Sokeeye ee 20-ka sanno socday, wuxuuna xusay inay Madaxweyne Farmaajo soo wajahi doonaan Marxallado muhiim ah.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Britain, Boris Johnson waxa uu sheegay inuu danaynayo Kulan uu la qaato Madaxweynaha cusub Somalia iyo inuu kala shaqeeyo sidii loo wadaagi lahaa mudnaanta sidii loo yarayn lahaa Macluusha, xaqiijinta Ammaanka o oay ku jirto Dib-u-habayan lagu sameeyo Qeybta Ammaanka Somalia
Dhinaca kale, Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta, Axmed Abu Kheyd ayaa soo dhaweeyey Doorashadda Madaxweyne Farm,aajo.
Hadal-qoraal oo uu soo saaray ayuu ku sheegay inay Dowladaha Jaamacadda Carabta sii wadi doonaan Taageeradda ay la garab taagan Dowladda Federalka iyo Ummadda SoomaalidaMuqdisho Feebaraayo 09, 2017Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen
Jimcaale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay dhagaxaanta waa weyn ee lagu jaray wadooyinka Muqdisho, in aysan aheyn kuwo lagu sugi karo amniga.
Waxa uu sheegay dhagaxaanta wadooyinka lagu jaray muhiim in ay tahay in laga qaado, islamarkaana dadka shacabka ah ay sugtaan amnigooda, kana
hortagaan amni darada.
Wadooyin badan oo Muqdisho ka tirsan, Hoteelo iyo xarumo Dowladeed ayaa waxaa lagu jaray dhagaxaan waa weyn oo loo maciin baday sugida amniga.Muqdisho Feebaraayo 09, 2017 Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa caawa
Hotelka Jaziira waxa uu casho sharaf ugu sameeyay Musharaxiintii uu kaga guuleestay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho.
Casho sharafta waxaa kasoo qeyb galay inta badan Musharaxiintii Farmaajo kula tartantay kursiga Madaxweynaha Soomaaliya, waxa ayna Musharaxiintan u badnaayeen kuwii isku baheestay in isbadal lagu sameeyo
Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo R/Wasaare
Cumar C/Rashiid ayaan kamid aheed Musharaxiintii caawa kasoo qeyb gashay Casha sharafta uu sameeyhay Madaxweynaha Guuleestay ee Maxamed Farmaajo.
Musharaxiintii caawa a kulantay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa
la sheegay in ay kawada hadleen guushii ay ka gaareen in isbadal lagu sameeyo Hogaanka uuna midkood kusoo baxo xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Sida aan Wararka ku helnay Musharaxiinta qaarkood ayaa Madaxweynaha cusub xasuusiyay balantii ay wada galeen intii olalaha socday, waxa ayna
qaarkood codsadeen in lagu soo daro Xukuumada cusub uu soo dhisi doono Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahad celiyay Musharaxiinta uu la kulmay
taageeradii aan la ilaawi karin ee siiyeen, waxa uuna sheegay in mar walbo uu u baahan yahay taladooda iyo taageeradooda uuna soo dhaweyn doono.
Musharaxiinta Madaxweyne ayaa iski baheestay in ay xilka ka tuuraan Madaxweyne Xasan Sheekh ayna codkooda ugu dambeyn wada siiyaan Musharaxa
ugu codadka badnaaada una soo baxa wareega ugu dameeya taa oo ay ka dhabeeyeen Musharaxinta sida muuqata.
Muqdisho Feebaraayo 09, 2017 Somaliland ayaa si taxadar leh uga hadashay Doorashaddii Madaxweynaha Cusub ee JFS, Maxamed C/llaahi Farmaajo.
War-saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyadda Somaliland ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan waxa ay ugu yeereen Go’aankii ka soo baxay
Golaha Barlamaanka Somalia ee ay ku xulanayeen Mudanaha loo dhiibayo Talada dalka Somalia.
Xukuumadda Somaliland waxay soo dhaweynaysaa go’aankii ka soo baxay kulanadii is-daba joogga ahaa ee ay Mudanayaasha Golaha Baarlamaanka Soomaaliya ku kala cuganayeen Mudanaha loo dhiibayo Hoggaanka iyo talada
dalka aan jaarka nahay ee Soomaaliya. Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waanu ku hambalyeynaynaa xilkaa loo igmaday waxaanannu ALLAH uga baryeynaa inuu xilkaa iyo masuuliyaddaa ku asturo.
Sidoo kale, Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya waxaanu si cad ugu sheegaynaa in Jamhuuriyadda Somaliland aanay meteli karin shaqsiyaad danaystayaal ah oo Muqdisho laga cugtay. Waa maag iyo meel ka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaamado cid aan shacbiweynaha Somaliland dooran, ama aan haysanin kalsoonidooda. Ummadda Somaliland waxaa matala oo kaliya, kana mas’uul ah Madaxweyne iyo M/weyne ku xigeen
ku yimi doorasho xor iyo xalaal ah iyo Goleyaal Qaran oo ku yimi rabitaanka iyo Codka ummadda JSL.
Guntii iyo gebagabadii, JSL waxay xasuusinaysaa Madaxweyne Farmaajo in Somaliland ay tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay Nidaamka Federaalka, waxayna diyaar u tahay inay soo fadhiisato gole kasta oo caalami ah oo xaajadeeda lagu gorfaynayo.WARARKA MAANTA Feebaraaayo 08, 2017 Ku soo dhawaada Madaxweynaha Cusub ee Jamhuuriyadda Fedeeraalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmajo. #Welcome to the Somalia's new #President H.E. Mohamed Abdillahi Farmajo, & we thank to #Somalia's Lower & Upper House of Representatives
Su'aasha Maanta: Haddii Ummadda
Soomaaliyeed Iyo Beesha Caalamkaba ku tilmaameen inay doorashadan
tahay mida ugu musuqmaasuqa badan ee soo martay taariikhda Ummadda
Soomaaliya? Ma waxaa cad inay Ummadda Soomaaliyeed Iyo Beesha
Caalamka aysan wax shaqayn iyo dhaqaallo siin doonin dadkii ku
guuldaraystay 4 sanno ee la soo dhaafay kuwaasoo aan la siin
dhaqaalihii loo ballanqaaday gudaha iyo dibaddaba? Yaase mudan inuu
hoggaamiyo Ummadda Soomaaliyeed 4 sanno ee soo socota? Muqdisho Feebaraayo 08, 2017 Wadooyinka
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa dhamaan xiran,
waxaana aad loo adkeeyey amniga magaalada iyadoo maanta ay dhaceyso
Doorashada Madaxweynenaha Soomaaliya.
Dhinaca kale waxaa magaalada ka socda shirar u dhexeeya qaar ka
mid ah Musharrixiinta, iyadoo qaar kalena ay ka hareen tartanka, oo
C/laahi Cali Xasan iyo C/raxmaan Sheekh Maxamed (Faroole) ayaa ka
tanaasulay Musharaxnimada xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaanada Baarlamanka ayaa iyaguna aad u mashquulsan oo marba
Musharax la kulmaya, ayada oo la isku dayayo in la kasbado codadkooda
ka hor Doorashada maanta dhaceysa.
Muqdisho Feebaraayo 08, 2017 Hanaanka
Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid u burbursan sidii
kaabayaasha dalka oo kale. Ma jiro diiwaanka cod bixiyeyaasha, mana
jiro sidoo kale hanaanka kaararka aqoonsiga ee muwaadinnimo.
Doorashooyinka iminka dhacaya ma noqon doonaan kuwii ugu
dimoqaraadiyeysnaa, laakinse haddii doorashada madaxweynaha ay
todobaadkan hagaagto, ayaa waxaa loo arkaa inay noqonayso tallaabo
aad u weyn oo loo qaaday mustaqbalka Soomaaliya .
Boqolaal ciidammada ammaanka aya ku sugan waddooyinka muhiimka ah
ee caasimadda oo la xiray. Waxaa sidoo kale la hakin doonaa
duulimaadyada maalinta Arbacada ah ee ay doorashadu dhaceyso.
Mid ka mid ah walaacyada ugu weyn ee hareeyay doorashadan ayaa ah
Musuqmaasuqa. Wax is daba marin xoog leh ayaa la sheegayaa in ay ka
dhacaday doorashadii baarlamaanka marakaasoo xildhibaannada qaarkood
la sheegay inay codadka iibsadeen. Khubaro ayaa ka digaya in
musuqmaasuqu uu wiiqi karo kalsoonidii muwaadiniinta, kuwaasoo horeba
aan ugu faraxsanayn inaysan toos u dooranin madaxweynaha.
”Way ka fiicantahay doorashooyinkii horay u dhacay, balse
shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan wax ka fiican doorashadan. Waana
la sameyn karay runtii oo wakhti fiican oo lagu sameeyo ayaa la
haystay”, ayuu yiri Mursal Saney oo ka tirsan machadka Heritage.
Ammaanka magaalada Muqdisho oo la adkeeyay maalin ka hor
Cumar Cabdirashiid oo ka digay ‘faragelinta’ doorashada ee
Waxaa cabsi laga qabaa in kooxda Al- Shabaab ayaa soo qaado weerar
inta ay socoto doorashada.
Labada aqal ee baarlamaanka ayaa qof kaliya ka dooran doona dhowr
iyo labaatanka murashax ee dhamaantood ragga ah ee doonaya inay
noqdaan madaxweynaha soo socda.
Si haddaba ay doorashadan u dhacdo ayaa 135 oday-beeleed waxay soo
xuleen in ka badan 14,000 oo wakil oo dalka oo dhan ka kala yimid.
Wakiillada ayaa dabadeed waxay doorteen xubnaha aqalka hoose ,
ayadoo xubnaha aqalka sarena ay soo doorteen ergooyin fariistay
xarumaha maamul goboleedyada.
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed: Doorashada wax isdabimarin
Guud ahaan 329 xildhibaan ayaa la soo doortay, ayaga ayaana iminka
noqonaya kuwa madaxweynaha soo socda soo dooran doona.Dumar badan
ayaa qayb ka noqonaya hanaanka doorashada, kuwaasoo ah ilaa 26%
Labo dumar ah oo ay ka mid tahay Faaduma Dayib, kuwaasoo hore u
sheegay inay doonayaan inay madaxweynenimada u tartamaan, ayaa ka
Dagaallo soconayey ku dhawaad 30 sano ayaa dalka burburiyey,
ayadoo qabaa’ilkuna u dagaallamayaan sidii ay Soomaaliya u
Dadka Soomaaliyeed waxay iminka rajo ka qabaan in haddii
doorashooyinkan hagaagaan ay ku xigi karaan kuwo kale oo la qabto
2020, waxaase ka horraynaya in la helo madaxweyne iyo xukuumad
Muqdisho Feebaraayo 08, 2017 Doorashada
Madaxweynaha Soomaaliya oo ay u taagan yihiin 22 Musharax
bilaabashadeeda ayaa waxaa ka harsan saacado, maadaama maanta oo
Arbacao ah loo qorsheeyay in la qabto.
Magaalada Muqdisho ayaa xalay waxa ay aheyd mid mashquul badan,
marka loo eego xaga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Hoteelada ugu waa weyn ee Muqdisho iyo guryaha Musharaxiinta waxaa
xalay ilaa saakay aroorti ka socday kulamo ay yeelanayeen
Musharaxiinta iyo xildhibaanada Labada Gole ee Dowladda Federaalka.
Musharaxiinta ayaa xildhibaanada Dowladda Federaalka ku sameynayay
xod xodosho, taas oo ay ku weydiisanayaan codkooda, waxaana ay u
sameynayeen balan qaadyo.
Jawiga Magaalada Muqdisho ayaa maanta ah mid degan, waxaana dhaq
dhaqaaqa uu yahay mid aad u yar, maadaama dadka mar hore lagu
wargeliyay in uusan dhaq dhaqaaq jirin maalmaha Doorashada
Soomaalida meel walba oo ay joogaan ayaa waxa ay isku
diyaarinayaan Daawashada iyo dhageysiga Doorashada Madaxweynaha
Soomaaliya oo saacado kadib ka bilaaban doonta xarunta Ciidanka Cirka
Muqdisho Feebaraayo 08, 2017 Allaha u
naxariistee waxaa Xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho
Guddoomiyihii hore ee degmada Xamarweyne C/laahi Sahal Ibraahim
Wararka ayaa sheegaya in Guddoomiyaha uu xanuunsanaa maalmihii ugu
danbeeyay isla markaana Xalay uu ku geeriyooday mid ka mid ah
Sidoo kale Waxaa Wararku ay sheegayaan in Guddoomiyaha uu Wadnahu
Istaagay sidaana uu ku dhintay.
Duqa Muqdisho ayaa Ka Tacsiyeeyey Geerida ku timid Guddoomiyihii
hore ee Degmada Xamar Weyne C/llahi Sahal Gardhuub, wuxuuna Alle uga
baryay inuu Janadii Fardowso ka waraabiyo.
Maanta ayaa lagu wadaa in lagu aaso Magaalada Muqdisho,inkastoo ay
Wadooyinku u Xiran yihiin Arrimaha Doorashada.
Qadra Feebaraayo 08, 2017 Madaxweynihii
hore ee Soomaaliya, C/qaasim Salaad Xasan, ayaa wuxuu ka hadlay
Doorashada maanta lagu wado in ay ka qabsoomto Magaalada Muqdisho.
C/qaasim Salaad Xasan, ayaa arrin dadka iyo dalkuba u baahan
yihiin ku sheegay in la soo doorto madaxweyne, hadhow soo xulan kara
Ra’iisal Wasaaraha soo xusha Gole Wasiiro oo tayo leh.
C/qaasim Salaad Xasan oo la hadlay VOA, lana weydiiyay rajada uu
ka qabo dowlad amniga hanata oo Somaliya yeelato, ayuu sheegay in
rajadiisa ay aad wayn u tahay.
Laba iyo labaatan Musharax, ayaa waxaa hadda la’ogyahay in ay u
sharaxan yihiin jegada madaxtinimada dalka, waxaana Magaalada
Muqdisho laga dareemay baaxadda ololaha ay ka wadaan
Muqdisho Feebaraayo 08, 2017 Guddoomiyaha
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa
qaba in Doorashada laga ilaaliyo wax is daba marin, maadaama loo
baahan yahay in la helo Hoggaamiye daacad ah.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa xildhibaanada Labada Gole ee
Dowladda Federaalka ugu baaqay in ay in ay doortaan Madaxweyne dalka,
dadka iyo diinta wax u qabta, si dalka uu uga saaro cakirnaanta hada
uu ku jiro.
Maanta Magaalada Muqdisho gaar ahaan dhismo ku yaalla inta u
dhaxeysa Garoonka Diyaaradaha iyo xarunta Afasiyooni waxaa ka
dhaceysa Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, taas oo ay ku
tartamayaan Musharaxiin fara badan.
Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyay waxaana
wadooyinka la soo dhoobay Ciidamo aad u fara badan, kuwaas oo ka
hortagaya falalka la xiriira amni darada.
WARARKA MAANTA Feebaraayo 0, 20173
WARARKA MAANTA Feebaraayo 02, 2017 Su'aasha Maanta: Ma khaa'inul waddan
Madaxweynihii hore Xassan Shiikh Maxamuud baa amray in la faafiyo
runta iyo lugooyadii uu geliyey Ummadda Somaaliyeed? Mise Ummadda
Soomaaliya iyo warbaahinta ayaa nacday daba-dhilifnimadiisa? Meeqo
lacag ah ayaa uu ka xaday Ummadda Soomaaliyeed madaxweynihii hore ee
Soomaaliya Damu-Jadiid Mudane Xassan Shiikh Maxamuud iyo kooxdiisa
khaa'imiinta Damu-Jadiid ee cayrisay se
WARARKA MAANTA Janaayo 18, 2018 Su'aasha Maanta: Maxay tahat sababta Xildhibaan Maamulka Koonfur Gableed ay rabaan inay xilka uga qaadaan Shariif Xassan Shiikh Aadan "Shariif Sakiin"? Maxayse Xildhibaannadda Maamulka Puntland u diyaarinayaan inay xilka ka qaadaan Madaxweynaha Maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas kadib markii uu ku guuldaraystay inuu wax qabto amniga dowlad gobaleedka Puntland xitaa har-cad la billaabay in gabdhaha lagu kufsado magaalooyinka waaweyn ee Puntland?Galdogob Janaayo 18, 2017 Waxaa Halkan idin kugu Soo gudbineynaa Wareysi Cabdi Maalik Coldoon la yeeshay Gabadhii lagu kufsaday Magaalada Galdogob ayaa Sheegtay in Raga kufsaday ay sixun oo bini aadanimada ka baxsan ula dhaqmeen sido kale ay Sharafteeda Gabarnimo meel xun uga dhaceen https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PvcvY2Lh6fUBaydhabo Janaayo 18, 2017 Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa
ay sheegeen in ay Mooshin ka keenayaan Madaxweynaha Maamulkaasi Shariif
Xasan Sheekh Aadan.
Xildhibaan Cusmaan Maxamed Caato oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in Mooshin ay u keeneen sababo la xariira xil gudasha la’aan ku timid Madaxda Koonfur Galbeed.
Waxaa uu sheegay in Mooshinka xildhibaanada keenay ay dhan yihiin 84 mudane , islamarkaana ay doonayaan in ay xilka ka qaadaan Madaxweyne Shariif.
Waxaa uu tilmaamay labadii sano ee uu xilka hayay in uusan waxba u qaban bulshada kunool gobolada Bay , Bakool iyo Shabeelaha Hoose.Garoowe Janaayo 18, 2017 Sida uu Sheegay Taliye kuxigeenka Saldhiga Garowe Cali Maxamed Muuse (Cali Kalluun) Gabadhaan ayaa Lagu qabtay Kadib Markii Ay Xanuunkaasi Qaad siisay Sargal ka Tirsan Booliska oo Garowe mar ku Guursaday, Iyo Dadkale oo looga Shakisanyahay
Taliyahu wuxuu Beeniyay in Gabadhaasi ay ku soo socoto Bosaso, Asagoona Sheegay in sida ugu dhakhsiyaha badan sharciga loo horgeynayo, Haweyneydaasi Xanuunka Faafinaysay,
Siduu Sheegay wey Xirantahay, Waxeyna Haweyneydaasi ka soo Jeeda Deegaanada Somaliland, isagoo Sheegay iney la soo xiriireen Ehelkeeda kana warqabaan iney xirantahay,
Taliyaha ayaa mar la weydiiyay qaabkii ay ugu suurtowday iney haweynaydaasi gacanta ku soo dhigaan ayuu sheegay in ay Haweynaydaasi guursatay ninka Booliska ah kadibna Markii uu furay ay u sheegtay iney sumeysay Dantii ay laheydna ka Gaartay
Dhinaca Kale wuxuu been abuur ku tilmaamay warara Sheegaya in Gabadhaasi ay ku soo socto Boosaso, oo doonayso iney ku faafiso Cudurka,
Wuxuuna been abuur ku tilmaamay Warar lagu faafiyay Baraha Bulshada,
Maalmahan ayaa Aad looga hadal Hayay Baraha Bulshada Sawirro laga faafiyay gabadhaasi oo lagu sheegayay iney
Cudurka ku faafinayso deegaanada Puntland,Gambia Janaayo 18, 2017 Madaxweyanaha dalka Gambiya Yaxya Jammeh ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu wadankiisa gelayo isaga oo sheegay in dalal shisheeye ay
farageliyeen doorashadii halkaasi ka dhacday.
Adama Barrow ayaa bishii la soo dhafay madaxweyne Jammeh kaga guuleystay doorashadii ka dhacaday Gambiya.
Yaxya Jammeh oo difaaca talaabada uu qadaay ayaa xusay in xaalad degdeg ah oo lagu dhawaaqo loo baahanyahay madama sida uu hadalka u dhigay ay jirtay faragelin sisheeye oo xad dhaaf ah sido kalena anan horay loo arag.
Waxaa uu dhanka kale telefishinka dolwada ka sheegay in faraha lala galay arrimaha gudaha ee dalkiisa.
Sido kale madaxweynahan oo ku adkeysanayo in uu xilka sii hayo ayaa faragelintaasi ku tilmaamay in ay keentay xasarad anan loo baahneyn oo halis galisay xornimada, amaanka iyo xasiloonida Gambiya.
Dastuurka Gambiya ayaa qabo in xaalad degdeg ah oo uu madaxweynaha ku
dhawaqay uu wadanka ku jirayo mudo 7 maalmood ah balse hadii baarlamaanka uu ansaxiyo ay qadaaneyso 90 maalmood.
Iyada oo ay xaalada sidan tahay ayaa lagus oo waramaya in 7 ka mid ah
wariyaasha ajnabiga ah laga mamnucay in ay galaan dalka Gambiya.Galmudug Janaayo 18, 2017 Wasiiro katirsan maamulka Galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Baarlamaanka dhawaan Xilka ka qaadeen C/Kariin Xuseen Guuleed in uu aqbalo xil ka qaadista lagu sameeyay.
Wasiir dowlaha wasarada Kaluumeesiga ee maamulka Galmudug Juneyd Ismaaciil Cigale ,oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magalaada Muqdisho ku kulmeen qaar kamid ah golaha Wasiirada Galmudug ayna taageereen go’aankii Baarlamaanka.
Waxa uu tilmaamay Wasiirka in isku raaceen Wasiirada kulmay in ay taageeraan Go;aankii Baarkamaanka kalsoonida kala noqdeen Guuleed, waxa ayna ugu baaqeyn Madaxweynaha Galmudug in uu aqbalo go’aanka Baarlamaanka xilkana isaga dago.
Waxa uu sheegay Juneyd Ismaaciil Cigale in ay ka xun yihiin in xiligan Galmudug ay gasho marxalad xun , waxa uuna tilmaamay in Muhiim tahay Madaxweynaha in uu meesha isaga tago si loo bad baadiyo maamulka Galmudug.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/Kariin Xuseen Guuleed ayaa wali diidan in uu aqbalo go’aankii ay dhawaan xilka uga qaadeen Baarlamaanka Galmudug, waxaana xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay magaalada Cadaado oo maamulka Galmudug Xarun KMG u ah.Jubbaland State Janaayo 18, 2017 Shacabka kunool degaanada maamulka Jubbaland laga doonayo in ay gacanta dowladda ay kusoo celiyaan dhulkii ay la aheyd dowladdii dhexe.
Magaalada Kismaayo oo ka mid ah Magaalooyinka ugu waa weyn Soomaaliya
ayaa dowladdii dhexe waxaa ay ku laheyd dhulal aad u farabadan , waxaana xilliyadii burburka la wareegay Shaqsiyaad gaarka ah oo wali gacanta ku haya.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa horay u sheegay in aysan dadka kunool Kismaayo aysan ka yeeli doonin in ay gacanta ku hayaan dhulkii ay
lahaan jirtay dowladdii dhexe , islamarkaana dhulkaasi uu hadda u baahan yahay maamulka Jubbaland.Muqdisho Janaayo 18, 2017Al-Shabaab "UGUS" ayaa toogtay Askari u dhashay dalka Uganda oo ay gacanta ku hayeen, waxaana Askarigaasi lagu qabtay dagaal Al-Shabaab iyo AMISOM dhexmaray Bishii September ee Sanadkii 2015 tii.
Sida ay daabacayaan Warbaahinta Caalamka Al-Shabaab ayaa Muuqaal ka soo duubay Askarigaasi ka hor inta aysan dilin.
Askarigaasi ayaa sheegay in ay dayacday dowladda Uganda ,islamarkaana
muddo ka badan Hal sano uu gacanta ugu jiray Xarakada Al-Shabaab.
Sidoo kale Warbaahinta dalka Uganda oo si weyn u hadal haysa arintaani ayaa sheegaya in Askarigaasi ay dhagaha ka furaysatay dowladda, waxaana qaar ka mid ah Ehelada Askarikaasi ay sheegeen in ay muhiim aheyd in dowladdu ay wadahadal la gasho Al-Shabaab ka hor inta aan la toogan.
Dowladda Uganda ayaa dhowr jeer ku hanjabtay in ay soo furanayso Askarigaasi sanadkii 2016 dii.
Ilaa iyo hadda majirto Wax war ah oo kasoo baxay dowladda Uganda oo ku aadan toogashada loo geysatay Askarigaasi ka tirsanaa ciidanka dowladda Uganda ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM.New York Janaayo 18, 2017 Warbixin uu Xoghaayaha Guud ee QM u gudbiyey Golaha Ammaanka ee QM ayaa lagu sheegay inay Ciiddanka Dowladda Somalia iyo kuwa Hawlgalka AMISOM dileen 92-qof oo rayid ah afartii bilood ee ugu dambaysay sannadkii 2016-kii.
Warbixinta waxaa lagu soo gunaanaday inay Mushaaraadka ay Deeq bixiyayaasha bixiyeen si caadi ah loo siiyo Ciiddanka Milliteriga, Boliska Federalka iyo 1,000 Saraakiisha Bolis-gobaleedka ku sugan magaallooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, balse lama shaacinin kharajka lagu
bixiyo Mushaaraadkaasi.Muqdisho Janaayo 18, 2017 Qarax ayaa saaka waxa uu ka dhacay Degmada Wardhiigleey ee Gobolka Banaadir kaas oo sida la sheegay ahaa Bam nuuca gacanta lagu tuuro ah.
Wararka ayaa sheegaya in Qaraxa uu ahaa Bam Gacmeed lagu tuuray Laanta 3aad ee degmada Wardhiigleey ee Gobolka Banaadir.
Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay Bam Gacmeedkaasi la sheegay in lagu tuuray Laanta 3aad ee degmada Wardhiigleey.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha iyo Masuuliyiinta degmada Wardhiigleey ee Gobolka Banaadir.dir kaas oo sida la sheegay ahaa Bam nuuca gacanta lagu tuuro ah.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha iyo Masuuliyiinta degmada Wardhiigleey ee Gobolka Banaadir.WARARKA MAANTA Janaayo 17, 2017Su'aasha Maanta: Ma is-weydiiyeen Shacabka Soomaaliyeed maxay khaa'iimiinta argagixisadda Damu-Jadiid ay u soo celin la' yihiin lacagtii ay ka dhaceen Ummadda Soomaaliyeed si loogu soo gato cunto ay abaaraha uga baxaan ayaga iyo xoolaha sii baaba'aya? Mise waxuu umaleeyaa Madaxweynihii hore ee Damu-Jadiid Xassan Shiikh Maxamuud inuu Ummadda Soomaaliyeed sii lugooyn karo Ummadda Soomaaliyeed Muddo 4 sanno oo kale? Soomaaliya waxay u baahan tahay Madaxweyne Iyo Ra'iisal Wasaare Cusub? Marka runta waa loo sheegay khaa'inul waddan Xassan Shiikh Maxamuud Iyo Xildhibaan Faarax Cabdiqaadir oo ahaa daba-dhilifkii dumiyey laba xukuumaddood ay kala hoggaaminayeen laba ra'iisal wasaare Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Iyo Cabdiwli Shiikh Axmed marka Ummadda Soomaaliyeed way ogtahay khasaaraha aan la soo koobi karin ee aad geliseen dalka Soomaaliya muddadii 4 sanno ee aad xilka ku qabsateen sharci-darro la dhoodhoobay. Kampala Janaayo 17, 2017 Rag culus oo Kampala uga dhawaaqay go'aan aysan filayn Ururka Argagixisadda Damu-Jadiid https://www.youtube.com/watch?v=kxIOM_sAvC4Muqdisho Janaayo 17, 2017 Wakiilka Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan arimaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha AMISOM Francisco Madeira ayaa sheegay in AMISOM ay u baahan tahay ciidamo dheeraad ah.
Waxaa uu sheegay in hoos u dhac uu ku imaan doono ciidanka AMISOM ee Joogga Soomaaliya ,madaam ay suurta gal tahay in dowladdo badan ay kala baxaan dalka Soomaaliya ciidamada ka joogga sidaas darteedna loo baahan yahay in AMISOM lagu soo kordhiyo ku dhawaad 9000 kun oo Askari.
Francisco Madeira ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladdo badan oo ka mid ah howlgalka AMISOM ay ku hanjabeen in ay ciidankooda ay kala baxayaan Soomaaliya.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in ay jirto dhaqaalo xumo soo wajahday ciidanka AMISOM.
Tirada ciidanka AMISOM ee Joogga Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in ay adag tahay in ay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab.
Hadalka kasoo baxay Francisco Madeira ayaa kusoo beegmaya Xilli dhowr
dowladood ay ku hanjabeen in ay ciidankooda ay kala baxayaan Soomaaliya.Cadaado Janaayo 17, 2017Dagaal xooggan ayaa ka billowday magaalada Cadaado, ee xarunta KMG ah
maamulka Galmudug halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa xiisado ka dhashay xil-ka-qaadistii Xildhibaanada ku sameeyeen Madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed.
Dagaalka ayaa qarxay markii ciidamada NISA ay tageen xarunta Baarlamaanka, halkaasi oo ilaalo ka hayeen Booliska Galmudug, oo la sheegay inuu ka biyo diideen amar kasoo baxay Guuleed oo ku aadan inay xiraan xarunta, si aysan ugu shirin Xildhibaanada xilka ka qaaday.
Goob joogayaal, ayaa sheegaya inay maqlayaan rasaas xoogan iyo hugunka hubka culus, oo Ciidamada NISA iyo booliska isku waydaarsanayaan
nawaaxiga xarunta Baarlamaanka.
7 Askar oo 4 kamid ah NISA katirsantahay ayaa ku dhaawacmay isku dhaca labada ciidanka, iyadoo aysan jirin cid katirsan laamaha ammaanka iyo mas’uuliyiinta Galmudug oo ka hadashay dagaalka socda.
Madaxweyne Guuleed, ayaa wax kadib xilka qaadista lagu sameeyay ku laabtay magaalada Cadaado isagoo maamulkaas kusoo rogay xaalad deg deg ah.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxa’ed Xaashi Carabeey, oo kula kulmay shalay Cadaado Taliyaha AMISOM Gen. Soubagle, ayaa codsaday ciidamo dheeraad ah oo ka socdo AMISOM si xiisada loo qaboojiyo.
Madaxda Somalida, beesha Caalamka iyo AMISOM ayaa si wadajir ah ugu baaqday Saraakiisha Galmudug inay Nabada ilaadhanBaydhabo Janaayo 17, 2017 Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa
ka dalbaday ciidamada xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM in ay ka shaqeyaan sidii amni buuxa looga dhalin lahaa wadada isku xirta Muqdisho iyo sidoo kale Baydhabo.
Waxaa uu sheegay in Muqdisho iyo sidoo kale Baydhabo ay isku jiraan 240 KM , islamarkaana ammaanka wadadaasi uusan hagaagsaneyn.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in la qaado howlgal deg deg.
Waxaa uu sidoo kale uu sheegay in Koonfur Galbeed ay ka shaqeyn doonto sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka wadadaasiMuqdisho Janaayo 17, 2017 Howlgal ay xalay Ciidamada Hay’adda Nabad suggida ee NISA ka sameeyeen degmada Waaberi ee magaalada muqdisho waxa ay ku qabteen Koox burcad ah oo Guri ku yaalla degmadaasi ku sameynaayay Lacag Doolar been abuur ah.
Hay’adda NISA ayaa Sheegtay ay la wareegtay Warshaddii iyo Qalabkii lagu dhaqayay Lacagahaasi Been Abuurka ah, iyadoo Xabsiga loo taxaabay ilaa lix ruux oo lagu tuhmaayo in ay ka shaqeynaayeen Warshadda.
Ciidamada Nabad suggida ayaa habeenadii lasoo dhaafay howlgallo ka waday Xaafado ka mid ah Magaalada Muqdisho.Puntland State Janaayo 17, 2017 Ciidamada Ammaanka maamulka Puntland ayaa maanta waxa ay howlgal ka wadaan Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Howlgalka ayaa yimid ka dib markii ay korortay Amni darada Magaalada Boosaaso oo ka mid aheyd Magaalooyinka ugu Ammaanka badan Soomaaliya.
Shalay gelinkii dambe ayaa Magaalada Boosaaso waxaa lagu dilay Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Puntland iyo Sidoo kale Askari Boolis
ah oo la socday.
Sidoo kale Magaalada Boosaaso ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacaayay dilal qorshaysan oo loo geysanayay Mas’uuliyiinta maamulka Puntland.Jubbaland State Janaayo 17, 2017
Magaalada Kismaayo Ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose Maamulka Jubbalandna u ah Xarunta KMG ayaa sheegaya in Askari ka tirsan Ciidamada
Jubbaland uu Magaalada ku dhex dilay Askari kale oo asna ka tirsan Ciidamada Jubbaland.
Askariga la dilay ayaa lagu Magacaabi jiray Muqtaar Cabdi Afeey.
Askariga Dilka geystay ayaa ka baxsaday Goobtii uu ku dilay Askariga kale,waxaana Saraakiisha Ciidanka Jubbaland ay sheegeen in ay wadaan Baaritaano lagu soo qabanayo.
Illaa hadda ma jirto Cid sheegtay Sababta ka dambeysa ee Askariga uu u dilay Askariga kale
WARARKA MAANTA Janaayo 14, 2017
Su'aasha Maanta: Maxay tahay sababta uu hadda u kashifay
musuqmaasuqa baahsan ee Kooxda #Damu-Jadiid Iyo Mudane Damu-Jadiid
Xassan Shiikh Maxamuud oo ku guuldaraystay hoggaanka dalka muddadii 4
sanno ee la soo dhaafay? Mise doqon khaa'in ah ma damqado ilaa
qadaadka la qabto oo runta taabsiiyo sida uu xuquuqda dadlka Banaadir
u duudsiiyey, dhegeyso hee sida Somali Cable doodan u qabatay: https://www.youtube.com/watch?v=asQb4zZrMw4
Muqdisho Janaayo 14, 2017
Wasiir dowlaha Wasaarada arimaha dibada Soomaaliya Khaalid Cumar Cali
oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in shaqaalaha dowladda iyo
sidoo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay haystaan dhibaatooyin kala
duwan oo ay ka mid yihiin mushaar la’aan.
Khaalid ayaa sheegay in shaqaalaha iyo ciidanka xoogga aysan
mushaar qaadan muddo ku dhow 7 bilood.
Liiska Wasaarada Maaliyadda ayuu sheegay in ay ku cadahay in aysan
mushaar qaadan shaqaalaha dowladda.
Inta badan ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale shaqaalaha
dowladda oo ah xubnaha ugu muhiimsan shaqada dowladnimada Soomaaliya
ayaa la sheegaya in mushaarka ay ku shaqeeyaan uu ka maqnaado muddo
Xilliyada kala guurka ah ayaa ah waqtiyada ugu badan oo ay
shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale ciidanka Xoogga dalka aysan qaadan
Muqdisho Janaayo 14, 2017 Xildhibaan
Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ku guuldareystay hoggaanka baarlamaanka
Soomaaliya ayaa sheegay in xilligaan ku dhawaad 100 mudane ay u
diyaar garoobeen in isbadel uu ku yimaado hoggaanka Sare ee dalka
Xildhibaan Xidig ayaa sidoo kale sheegay in xildhibaanada Midoobay
ay doonayaan in ay doortaan hoggaan cusub marka la gaaro xilliga
Xildhibaan Xidig ayaa sidoo kale xusay in Isbadel ku yimaada
Madaxda Qaranka uu yahay mid waxtar uleh dalka iyo dadka
Ururka Midowga Yurub ayaa ka hadlay doorashada Gudoomiyaha
Baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale ku xigeenadiisa.
War kasoo baxay ururka Midowga Yurub ayaa loogu baaqay hoggaanka
cusub ee baarlamaanka Soomaaliya in ay ka shaqeeyaan dejinta Siyaasad
leh sharci iyo kala dambeyn.
Ururka Midowga Yurub ayaa sheegay in ay soo dhaweeynayaan
doorashada hoggaanka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale
doorashadii xildhibaanada Aqalka Sare iyo Golaha Shacbiga ee ka
dhaqan gashay Soomaaliya.
Waxaa loogu baaqay warka kasoo baxay Ururka Midowga Yurub in
xildhibaanada cusub looga baahan yahay in ay ka qeyb qaataan dhismaha
iyo nabadeynta Geeska Afrika.
“Xubnaha Ururka Midowga Yurub waxaa ay rajo fiican ay ka
muujiyaan doorashada hoggaanka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya,
waxaana ka rajeynaynaa in ay diirada saari doonaan in ay ka hortagaan
caqabadaha cusub ee soo wajihi kara” ayaa lagu yiri warka ururka
Ururka Midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay in tahay guul usoo
hoyatay dalalka Geeska Afrika dhammaan doorashada Afhayeenka golaha
“Waxaa ugu baaqaynaa xildhibaanada cusub in ay kasbaan
kalsoonida shacbiga Soomaaliyeed ee ay matalayaan” ayaa markale
lagu yiri warka kasoo baxay Midowga Yurub.
Muqdisho Janaayo 14, 2017 War
Qoraal ah oo la soo dhigay Barta Twitter-ka islamarkaana la sheegay
inuu ka soo baxay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof Maxamed
Sheekh Cismaan Jawaari ayaa lagu beeniyay in Guddoomiyaha
Baarlamaanka uu ka qeyb galay Shir Qadka Taleefanka lagu qabtay oo ay
yeesheen Hogaamiyaasha Madasha Wada-tashiga Qaran.
Warka ayaa lagu sheegay in Xilligaan aysan jirin Wax la yiraado
Madal wada-tashi oo uu dhacay Waqtigeedii islamarkaana uu hadda Dalka
Baarlamaan ka jiro,Baarlamaankuna uu badalay.
Warsaxaafadeedkii ka soo baxay Madaxtooyada Galmudug oo lagu
sheegay in Madashu ay shireen ayaa ahaa mid looga hadlay Xaaladda
hadda ka jirta Galmudug,inkastoo Guddoomiye Jawaari uu beeniyay inuu
ka qeyb galay.
Janaayo 14, 2017 Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka,
Donald Trump, oo ka hadlay qaar ka mid ah siyaasadahiisa dibadda
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka,
Donald Trump, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo
Ruushka iyo Shiinaha, taasise ay ku xiran tahay sida ay iyagu ula
Mr Trump ayaa u sheegay wargeyska Wall Street in cunaqabataynta
dhawaan lagu soo rogay Ruushka ay sii jiri doonaan “ugu yaraan
intii muddo ah” hasayeeshee markaa kaddib la qaadi doono.
Sidoo kale waxa uu sheegay in laga wadahadli karo siyaasadda
dalkiisa ee ku aadan Shiine midaysan, maadaama siyaasaddaasi jirtona
uusan Mareykanku aqoonsanayn Taiwan.
Dhanka kale, guddiga senate-ka Mareykanka ayaa baari doona eedaha
sheegaya in Ruushku uu isku dayay inuu faragelin ku sameeyo
doorashadii madaxtinimada waddankaasi.
Wareysigiisa ayuu Mr Trump ku sheegay in cunaqabataynta lagu soo
rogay Ruushka ay suuragal tahay in la qaado haddii Moscow ay
Washington ka caawiso dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada Islaamiga
iyo arrimo kale.
Waxa uu sheegay in uu rajaynayo inuu wadahadal la yeesho
Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin.
Arrinta Beijing-na, Mr Trump waxa uu sheegay in Shiinaha ay tahay
inuu u ogolaado shirkadaha Mareykanka ay la tartamaan kuwa Shiinaha
lacagtana uu ogolaado in suuqu sicirkeeda jaangooyo.
Cadaado Janaayo 14, 2017
Xildhibaanadii sheegay in ay
xilka ka qaadeen Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa kulan waxaa uu
uga socdaa Magaalada Cadaado ee Xarunta KMG ah ee maamulka Galmudug.
Kulankaan ayaa lagu soo waramayaa in xildhibaanada ay uga
hadlayaan arimo khuseeya Xaalada Galmudug oo ay ka mid tahay xil ka
qaadistii ay sheegeen in ay ku sameeyeen Madaxweynaha maamulka
Xildhibaanada ayaa horay u sheegay in kulanka ugu horeeya ee ay
yeeshaan ay ku magacaabi doonaan Guddi doorasho , inkastoo aan si cad
loo qeexi karin waxyaabaha ay ka hadlayaan xildhibaanada.
Mudanayaasha uu kulanku u socda ayaa sheegay in ay warbaahinta ay
usoo bandhigi doonaan waxyaabaha kasoo baxa kulanka.
Cadaado Janaayo 14, 2017 Wararka
naga soo gaaraya Magaalada Cadaado ee Xarunta KMG ah ee maamulka
Galmudug ayaa waxa ay kusoo waramayaan in maanta ciidamo dheeraad ah
la geeyay Hoteelada iyo xarumaha ay ku shiraan xildhibaanada kasoo
horjeeda Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Xildhibaanada Galmudug Qaarkood ayaa waxa ay doonayaan in ay ku
shiraan Hotelada si ay ugu dhawaaqaan guddi ka shaqeeya doorashada
Madaxweynaha maamulka Galmudug.
Waxgaradka Magaalada ayaa waxa ay wadaan dadaalo looga hortagayo
in ay dhacaan isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada Ammaanka iyo sidoo
kale xildhibaanada .
Shalay ayay aheyd markii Qaar ka mid ah Xildhibaanada baarlamaanka
maamulka Galmudug loo diiday in ay galaan Hotel ay qado ku la
Ammaanka Magaalada Cadaado ayaa aad loo adkeeyay, waxaana
wadooyinka iyo sidoo kale goobaha ugu muhiimsan Magaalada Joogga
Degaanada maamulka Galmudug ayaa waxa ay ku jiraan xaalad deg deg
Sidoo kale ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Cadaado ayaa Risaala
u sheegay in ay kala jabeen xildhibaanadii sheegay in ay xilka ka
qaadeen Madaxweyne Guuleed.
Baydhabo Janaayo 14, 2017 Ciidamada
gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa howlgallo ay maalmihii
lasoo dhaafay ay ka wadeen degaano hoos yimaada degmada Diinsoor ee
gobolka Baay waxa ay sheegeen in ay ku dileen sarkaal ka tirsan
Taliyaha Amniga degmada Diinsoor ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan
Cabdi Haajir ayaa waxaa uu sheegay in howlgallo ay ka fuliyeen
degaanka Raaxoole ee gobolka Baay ay ku dileen dagaalyahano ka tirsan
Waxaa uu sheegay in ay dileen Amiirka Al-Shabaab ee dhanka
Zakawaadka , islamarkaana ay gubeen Gaari uu saarnaa.Taliyaha
ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in ay sii laba jibaari doonaan
howlgallada ay ka wadaan degaanada hoos yimaada degmada Diinsoor ee
WARARKA MAANTA Janaayo 13, 2017
Muqdisho Janaayo 13, 2017 Beesha
Caalamka ayaa waxa ay ka hadashay dhawaaqii ka soo yeeray xubno ka
mid ah Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Galmudug, kaas oo ku aadanaa in
ay xilka ka qaadeen Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Saaxiibada daneeya arrimaha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin QM,
Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Talyaaniga, Belgium,
Netherlands, Sweden ayaa wa
|الأخبار باللغة العربية|
|Office of the President|
|Office of the Prime Minister|
|The Somali Police|
|Somali Embassies A-Z Directory |
|A-Z Gov-Directory |
|UN Links for Somalia|
|Somali Political Parties|
|Human Rights Watch|
|The UN in Somalia|
|Our Extraordinary Dignitaries|
|The UN Failures|